ပင်လယ်ကြီးပေါ်ရှိ အုန့် မှိုင်းနေသော တိမ်ထုကြီးက တဖြည်းဖြည်း နိမ့် ဆင်းလာသလို ဖြစ်လာပါသည်။
မိုး တို့ရွာချင်လာသလိုပါ။ တဝေါဝေါ တိုက်ခတ်နေသော လေထု ထဲတွင် မိုးငွေ့ ပါသော ရနံ့တို့ ကိုပါ ရှု ရှိုက်
ကျွန်တော်တို့ လည်း ကား ဆီသို့ပြန်လှည့်လာကြပါသည်။
နောက်ဖက်တွင်တော့ဒေါသ တကြီး ထကြွနေသော ပင်လယ်ကြီး ကျန်ခဲ့ ပါတော့ သည်။
ကား စ ထွက်တော့ကားရှေ့လေကာမှန်တွင် မိုးမှုန် မိုးစ လေးတွေ လာမှန်နေပါတော့ သည်။
“ကောက်စုကုန်း ” ဟု ခေါ်သော မဆုံးနိူင်အောင်ကို ရှည်လျားလွန်း သည့်နှစ်ထပ် အမြန် လမ်းမကြီး အတိုင်း
မြို့ ထဲ ပြန်ဝင် လာတော့ အောက်ဖက် ဘေးဝဲယာရှိ မြို့ ပြ ရပ်ကွက်တွေအားလုံး ၏ အရှိန်ညီးညီး တောက်ပ
လျက် ရှိသော မီးအလင်းရောင် တို့ ကြောင့်ကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံး လင်းလဲ့ဝင်းပ နေပါတော့ သည်။
ကား က အရှိန် နှင့်သွားနေရင်းက ဖြည်းဖြည်းချင်း အရှိန်ရော့ရပ်တန့် သွားပါသည်။ နှစ်ထပ် အမြန်လမ်းမကြီး
ဝန်းကျင်၏ ရောင်စုံ မီးရောင်တို့ ကို ငေးမိနေရင်း အမိမြန်မာပြည် ကို ဝေဟင် မှ လေယာဉ်ခရီးစဉ်ဖြင့်ပြန်ဝင်
ခဲ့ ရသည့်မြင်ကွင်း တို့ ကို ပြန်မြင်ရောင်လာနေမိတော့ သည်။
မုတ္တမ ကွေ့စ ရောက်လာသည်နှင့်လေယာဉ်ကြီးက တဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ နိမ့် ဆင်း စပြု လာတော့ သည်။
လဲလျောင်းနေသော နတ်သမီး လေးနှင့် တူ သည့်ကျွန်တော်တို့မြေ ပေါ်ကိုပါ။ ခဏ ကြာလာတော့ပဲခူး မြို့ 
ကို လှန်းမြင်ရပြန်ပါသည်။ ကျယ်ပြော ပြန့် ပြူး နေသော လည်ကွင်းတွေ၊ နောက် ဖြောင့် တန်းနေသော ကား
လမ်း မကြီးများ ၊ သစ်ပင် အုပ်များ ကို ကွဲကွဲ ပြားပြား မြင်လာ ရသော အချိန် တွင်တော့“ အင်းစိန် ထောင် ”
ကြီး ကို ဦးစွာ မြင်လိုက်ရပါတော့ သည်။ ရန်ကုန် အဝင်က ထောင်နှင့်စ သလိုပါ။
သစ်ပင် သစ်တော အုပ်တို့ က ခပ်စိမ်းစိမ်း ဖြင့်လတ်ဆတ်၊လန်းဆန်း စွာပဲ မြင်ရသလောက် အင်းစိန်ထောင်
ကြီးကတော့အပေါ်က ကြည့် ကြည့် ၊ ဘေးက ဘယ်က ပဲ ကြည့် ကြည့်နီညို ညစ်ညစ် နှင့် ရင်ထဲမှာ အုံ့ မှိုင်း
ညှိုးနွမ်းစွာ ကျပ်ကျပ်တည်းတည်း ကိုပဲ မြင်နေရပါသည်။
ထိုအထဲမှာ... “အမှားတရား ” များဖြင့်ကျူးလွန်မိသလောက် အချိန်များများ နေနေရသူများ ရှိနေသလို၊
“အမှန် တရား ” များကို များများစားစား ဖြင့်အထူးမြင် ခဲ့ မိသလောက် ကျယ်ကျယ် လောင်လောင် ထူးထူး
ခြားခြား လှုပ်နှိုး မိခဲ့ သူများလဲ အများအပြားရှိနေကြပါသည်။ အနာဂတ် ရွှေပြည်တော်ကြီး အတွက် မက်နေခဲ့ 
သော အမြဲ မက်ချင်နေသော အိပ်မက်များထဲတွင် အမှန်တရား အတွက် မှားယွင်းနေစွာ၊ မတူမတန်စွာနဲ့ ပဲ
တန်ဘိုးရှိလွန်းသော ဘဝရဲ့ဘယ်တော့ မှ ပြန်မရတော့ သော အချိန်များကို ရက်ရက်ရောရော ပေးဆပ်နေ
သူတွေအတွက်လဲ ပါ ပါသည်။ ယ္ခုတော့အမှန်တရား တို့ က နံရံ လေးဘက် ကြားတွင် ကွယ်ပျောက် နေရပြီ။
ညဘက် လေယာဉ်ကြီး မင်္ဂလာဒုံ လေဆိပ်ကို ဝဲ ဆင်းလာပြီ ဆိုရင်ဖြင့်မှောင်ထဲမှာပဲ ထွန်းထားသည့်မီးရောင်
တို့ က မှုန်ကုတ်ကုတ်၊ မှိန်တိန်တိန် နှင့် ၊ တွေ့ လိုက်ရသည့်လူတွေကလဲ မလန်းနေသလိုပါ။ အိမ်သားတို့ ကို
မတွေ့ ရမှီ ယူနီဖောင်းအပြာဝတ် လေဆိပ် လုပ်သားတို့ကိုယ့် အထုပ်ကို သူ့ ထက်ငါ အရင် လာလုလိုက်တာ
မြင်လိုက်ရကတဲက စောစော က အင်းစိန်ထောင်ကြီးကို ဝေဟင်က ဖူး လိုက်ရသလို ကျပ်တည်းမှုမျိုး ရင်မှာ
လေဆိပ်အပြင်လမ်းမပေါ်ရောက်တော့ လည်း ကိုယ့် ကိုယ်ကို မရဲတော့ သလို၊ အမှောင်ထဲပဲ တိုးဝင်လာနေရ
သလိုမျိုး ဖြစ်သွားရပါသည်။ လင်းနေသည့် မီးရောင်တို့ က နီကျင်ကျင်ဖြင့်ဟိုတစ်ကွက်၊သည်တစ်ကွက်ဖြင့် ပါ။
ဖျော့ တော့ သော အလင်းရောင်တို့ အောက်မှာ မကြည့် ပဲ မြင်နေနိူင်တာကတော့မြင်ကွင်း အပြည့် ဖြင့် 
အင်းစိန်ထောင် အရောင်ကဲ့ သို့အနီရောင် ဒို့ တာဝန်အရေးသုံးပါး ကဲ့ သို့ သော မြေဆိုက် ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများ
ထို အလွန်ပဲ ဖတ်လို့ ကောင်းသော ဆိုင်းဘုတ်ကြီးများကို ကျော်၍ ကြည့် လိုက်တိုင်း မလန်းသော မှောင်သော
ဝန်းကျင်ကို မြင်မြင်နေရသောကြောင့်သည်နိူင်ငံ၏ ပင်လယ်ကမ်းခြေ တလျှောက် ထောင်မတ်ဆိုက်ထူထား
သော ဖြူ စွတ်စွတ် ဖြင့်အလွန်မြင့် မားသော“Wind Power System ” ပန်ကာဒလက်တိုင်ကြီးများကို
သတိရမိပြန်ပါသည်။ အလကား ရသည့် လေ၊ လေ ထဲက လေ တို့ ဖြင့် အလင်းစွမ်းအင်၊ ပါဝါ စွမ်းအင် တို့ ဖြင့် 
တစ်မြို့ လုံး ထိန်ထိန်ညီးနေအောင် ထွန်းရရုံမက စက်မှုလုပ်ငန်း များပါ လည်ပတ် သုံးစွဲ နေကြပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဝယ် နိူင်ငံခြားသား ဘောလုံးသမား များကိုတောင် ခေါ်ယူ သုံးစွဲ နေနိူင်သည့်အလွန်
ပဲချမ်းသာ နေသော ဘောလုံးကလပ်ပိုင်ရှင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ရှင်ကြီးများ အများရှိနေကြပါပြီ။ တစ်ခါပဲ အကုန်
ခံလိုက်ရုံနှင့်အခါခါနှင့်တစ်သက်လုံးပဲ အကျိုးရှိမည့် ၊ ခုနှစ်ရက် သားသမီး တို့ထမင်းစားနိူင်တော့ မည့် 
သည် " Wind Power" စနစ်လေးကို ထို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ က တကယ်ပဲ လုပ်နိူင်ပါလိမ့် မည်လို့ ။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာ ပြည်မှာ သဘာဝ အရင်းအမြစ် များ များစွာပဲ ရှိနေပါသည်။
ပုဂံ ဘုရားတို့ ကို မျက်စေ့ တို့ မှိတ်၍ လက်အုပ်ချီ ဝှေ့ ယမ်း ဖူးမျှော်လိုက်တိုင်း မလွဲနိူင်အောင် လက်ညှိုးထိုးမလွဲ
အောင်ကို စေတီ ပုထိုး တို့များပြားသလို၊ မျက်စေ့မှိတ်၍ ပြောချင်သည့်တွင်းထွက်ကို ပြောကြည့် ပါလေ။
တစ်နေရာရာမှာတော့ရှိနေမှာ အသေချာပါပေ။ “ရွှေ” တောင်မှ ရေထဲက အလိုအလျောက် ထွက်ထွက် နေ
အောင်ကို အလွန်ပဲ ထူးဆန်းလွန်းသည့်ကမ္ဘာ့ဘယ်နေရာမှာမှ ဆင်တူ မရှိနိူင်တော့ သည့်ကျွန်တော်တို့ 
မြေ ကတော့ယ္ခု အလွန်ထူးဆန်းစွာပဲ ဆင်းရဲ လို့ နေပါတော့ သည်။
လုပ်နိူင်သည့်လူ့ စွမ်းအား အရင်း၊အမြစ် များ ရှိနေပါလျှက်နှင့်အရွယ်ကောင်းသော လူငယ်လူရွယ်များ ကမ္ဘာ
အနှံ့ အပြားမှာ ပုံစံ မျိုးစုံဖြင့်သူ့ ကျွန်ဖြစ်နေကြရပါသည်။ ဘဝတွေ အချိန်တွေ ရင်းနှီး နေရရင်း မိသားစုတွေကို
ခွဲခွာနေကြရပါသည်။ နှမြောစရာ ကောင်းပါဘိခြင်း။
အမှန်တရား ကိုတော့သက်ဆိုင်နေကြသူတွေ၊ ကိုယ့် ဖာသာကိုယ် တာဝန် ခံယူ နေကြသူတွေ အနေဖြင့် 
အသေချာပဲ ရဲ ရင့် စွာ ရင်ဆိုင် ရှာဖွေ ကြဘို့လိုပြီ ထင်ပါသည်။ ကိုယ်က မှန်တယ် ထင်လို့လုပ်ခဲ့ ၊စ ခဲ့ ကြပေ
မဲ့အချိန်က အမှန်အမှား ကို ရှင်းလင်း စွာပဲ ပြဆိုနေခဲ့ ပြီးပါပြီ။ မှားသည့်လမ်းကို လျှောက်မိနေလျှင်တော့ 
အချိန်နှင့်အမျှ အတိုင်းအဆ မဲ့ စွာဖြင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာ စေမှာ သေချာပါသည်။ တကယ်ပဲ တိုင်းပြည်ကို ချစ်တတ်
ပါသည် ဆိုပါလျှင် တစ်ရက်၊တစ်စက္ကန့် လေးမျှ တိုင်းပြည်ကြီးကို နောက်ထပ်မနစ်မွန်းအောင်လုပ်သင့် ပါသည်။
လူထုက အကျပ်အတည်း မျိုးစုံ ကို ကိုယ့် ဖာ ကိုယ်ပဲ ဖြေရှင်းနေရပါသည်။
မီးမလာတော့ဖယောင်းတိုင်တို့မီးစက်ကလေးတနိူင်ဝယ်လို့ ။
ရှာလို့မလောက် စားလို့ မလောက်တော့အပြင်ထွက်လို့ ၊ ရှိတာလေးတွေပဲ ရောင်းချ ပေါင်နှံ လို့ ....။
ဆိုင်ကယ်လေးတောင် မစီးရ၊စီးခွင့်မရှိရှာကြတော့တစ်ခြမ်းစောင်းပြီး ပွင့် ထွက်လုမတတ် ဘတ်(စ)ကားအို
ကြီး များကို စိတ်ရှည်ရှည်နှင့်စောင့် စီးလို့ ။
အလုပ်က အပြန်မှာ တစ်ခြမ်းစောင်း နေတဲ့ဘတ်(စ)ကားကြီးမှာ လူတွေက တစ်ပြွတ်ကြီး တွဲလောင်းကြီး
လမ်းပေါ် ထွက်ကျနေတာလေ။ အဲလို အချိန်များ ဆိုတော့ကျောမွဲ ခြင်းရိုင်းပင်းနေကြတာ။ တစ်ယောက်လက်
တစ်ယောက် ဖမ်းဆုတ် ဆွဲကိုင်ရင်းပါ။ တစ်ယောက်ခြေ တစ်ယောက်နင်း ထားမိကြပေမဲ့စိတ် ဆိုးဘို့သတိ
မရကြ၊ သတိ ရနေတာက အိမ်ကို ဘေးမသီပဲ ပြန်ရောက်ဖို့ ပါလေ။
Posted by ahphyulay at 8:20 PM5comments
အခုတလော ရင်ထဲမှာ တော်တော်လေး မောနေပါသည်။
ရင် ထဲမှာ မောနေရတယ်ဆိုတော့အပြင်ပန်းက လှုပ်ရှားမှု၊ အားဆိုက်ထုပ်ရမှု များလွန်လွန်းသောကြောင့် 
တစ်ကိုယ်လုံး ပင်ပန်းနွမ်းနယ် နေရသည့်အမောမျိုး မဟုတ်ပဲ အပြင်မှ ကိုယ့် ရင်ကို တရံမလပ် တိုးဝင်လာနေ
သော အာရုံ အမျိုးမျိုး တို့ ကြောင့်တစပ်စပ် ထိခိုက် ခံစား နေမိသော အမော မျိုး ဖြစ်ပါသည်။
တွေးမိသမျှသော အတွေး တို့ ကို ရင်ဘတ်ကြီးက အဆက်မပြတ်ပဲ အလျှင်မမှီအောင်ကို ရင်နှင့်အမျှပဲ လိုက်လံ
ခံစား နေမိသောကြောင့် လဲ မွန်းကြပ်သော အတွေ့တို့ ကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ် ခံစားနေရသလိုပါ။
ရာသီကလဲ တိုင်ဝမ်ကျွန်းကြီးကို အအေးလှိုင်းတို့ တသောသော ဖြတ်သန်းနေသော အချိန်မို့ဝန်းကျင် တစ်ခု
လုံး အရာရာ အားလုံး တစ်လောကလုံး မြူ တွေ ဆိုင်းနေပြီး စို စွတ်စွတ်နှင့်ကြည့် နေရင်း အရိုးထဲက ခိုက်ခိုက်
တုန်လာအောင် ကြက်သီး တို့ထလာအောင်ကို စိမ့် ပြီး အေးအေးလာနေတတ်ပါသည်။
အနွေးထည် အထပ်ထပ်နှင့်ခေါင်းစွပ် တို့ ပါ စွတ်ထားမိပေမဲ့လွတ်ထွက်နေသော နှာခေါင်း ထိပ်လေးနှင့် ၊
လက်ဖျား တို့ မှာတော့နာကျင် နေအောင်ကို အေးလွန်းနေပါသည်။ သည်ကြားထဲ လေရှုးလေး က တစ်ချက်
ချက်ဝှေ့နေတတ်တော့ကော်ဖီ သောက်ရတာတောင် ခါးကလေးကုန်းပြီး တုန်တုန် ရီရီ ဖြင့်မျိုချ နေရပါသည်။
မှုတ် နေဘို့ တောင်မလိုပဲ အငွေ့ တစ်ထောင်းထောင်းနှင့်ပူပူ လောင်လောင် ကိုပ်ဲတရှိုက်မက်မက် မျိုချ နေရ
အေးရတဲ့ ကြားထဲ လွမ်းမိပြန်ပါသောကြောင့်ရင်မှာ အမောတို့ ဖြင့်ကွဲအက်အက် ရှတတ ဖြစ်လာရပြန်ပါ
သည်။ အအေး တို့ ကိုတောင် မဖြေနိူင်မှီ၊ အလွမ်းတို့ပါ ထပ်ဆင့်လာပြန်သောကြောင့်ပြေအောင် ဖြေဘို့ 
ပို၍ ခက်ခဲ့ ရ တော့ သည်လေ ။
လွမ်းရခြင်း၊ တမ်းတ ရခြင်း တို့ က အခုလို ဆောင်းတွင်းဝယ် ကိုယ့် အခန်းထဲ တစ်ယောက်ထဲ ရှိသွားချိန်မှာ
တော့ပိုပြီး ထိထိ ခိုက်ခိုက် ကို ခံစားလာရတတ်ပါသည်။ တစ်ယောက်ထဲ ဆိုတော့ လဲ အထီးကျန်လာရတော့ 
အလွမ်း က ကိုယ့်အဖော် ဖြစ်လာရတော့ သည်။ အမတန်ကို ခံစားရခက်လွန်းသည့် ၊ ချက်ခြင်း ကို ဖြေလို့ 
မပြေ နိူင်တော့ သည့်အလွန် ဆိုးရွားသည့်ခံစား မှု မျိုးကြီး ဖြစ်ပါ၏
အသံထက်မြန်သည့် နှုန်းဖြင့် ချက်ခြင်းပဲ ပြေးပြီးတွေ့ ချင်နေသည့် သူ များကတော့ဟိုး မိုင်ပေါင်းများစွာ ဝေး
နေပြီး ကမ္ဘာ့မြေပုံ ပေါ်မှာ ကြည့် လျှင်လည်း နတ်သမီး လေး က နေ သည်နှင့်တူသည့်ကျွန်တော် တို့မြန်မာ
ပြည် က ကြယ် ကလေးများပါလေ။
နီးနီးလေးနဲ့ တောင် သတိတရ ဖြစ်ဖြစ် နေတတ်ပြီး ချက်ခြင်းကြီးပဲ တွေ့ လိုက်ချင်ပေမဲ့မတွေ့ နိူင်၍ စိတ် ဝယ်
ဒဏ်ရာ တို့ ရတတ်သလို၊ အဝေး က ကြယ်ကလေး များကို မတွေ့နိူင်တော့ ၍လည်း အတိတ်က ဒဏ်ရာတွေလို
မကျက်နိူင်တော့ အောင်ကို တစိုစို တသသ ဖြစ်နေရပါတော့ သည်။
သည်လက ခရစ်စ္စမတ်လ ဆယ့် နှစ်လပိုင်း ဆိုတော့မဝေးတော့ သော နောက်သုံးလေးလ ဆိုလျှင်ပဲ အတာ
သင်္ကြန်ကို တစ်ခါ ရောက်ပြန် ရတော့ မှာဖြစ်ပြန်သည်။ ခရစ်စ္စမတ် ကို အကြိမ်ကြိမ် ကြုံ ခဲ့ ရသလို၊ အတာ
သင်္ကြန် ကိုလည်း အခါခါပြန်ကြုံ ဖြတ်ကျော် နေရပေမဲ့တစ်ယောက်ထဲ အထီးကျန်စွာ၊ ခြောက်သွေ့ စွာ နှင့် ပါ။
သည်ကာလ တွေမှာ အိမ် ကို ပြန်တော့ ဘို့ ၊ ကြယ် လေးတွေ ကြားထဲ အတင်း ပြေးဝင် သွားဖို့အိမ်မက် တို့ 
အကြိမ်ကြိမ် မက်ခဲ့ ရသလို၊ မမက်ခဲ့ မိသော ကာလ များတွင်လည်း ပြန်မက်လာအောင် ထို အိပ်မက် လေးတွေ
ကို စောင့် စား တောင့် တ နေခဲ့ မိပြန်ပါသည်။ သည်မှာတော့ခရစ္စမတ်တို့ ၊ သင်္ကြန်တို့ က ရင်ကို မခုံ စေခဲ့ ပေ
မဲ့ထို အိမ်မက်လေးတွေကတော့ရင် ကို အတော်လေးပဲ လှုပ်ခတ်စေခဲ့ ပါသည်။
စိတ်တို့လေနေချိန်မှာပဲ သည်နိူင်ငံ၏ အကောင်းဆုံးဘဲပြုပ်ဖြင့်ကျော်ကြားသော တရုပ်လို “ကျင်းစန်း” ဟု
ခေါ်သည့်မြို့ လေးကို ဘောစိ ( အမော ထဲမှာ ရေးခဲ့ ဘူးသည့်ကျွန်တော်တို့သူဌေးပါ) က ခေါ် သွား၍
“ကျင်းစန်း” ကို သွားရာ လမ်းလေးကတော့အပြောကျယ်ကျယ်နှင့်အနက် စူးရှ သော ဆုံးစ မဲ့ သော ပင်လယ်
ပြင်ကြီး၏ ဘေး တောင်ကမ်းပါးယံ တလျှောက် ကွေ့ ကွေ့ ကောက်ကောက် ကပ်ဖောက်ထားသော လမ်းလေး
ကားပေါ်မှ လှန်းကြည့် မိတိုင်း လှိုင်းခေါင်း ဖွေးဖွေး လေးတွေကို မြင်နေရပါသည်။
လမ်းဘေး ကားရပ်နား စခန်း လေးတစ်ခု ရောက်တော့ခဏ ဝင်နားကြရင်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ သဲသောင်ပြင်
ပေါ် ဆင်းခဲ့ ကြသည်။ ပင်လယ်ပြင်ကြီး၏ အစွမ်းသတ္တိကတော့အရာရာကို လတ်ဆတ် လန်းဆန်း စေတာပါပဲ။
ဟိုး... အဝေး မှိုင်းညို့နေသော မိုးကုတ် စက်ဝိုင်း ကြီးဆီမှ ပင်လယ်ပြင်ကြီးကို ပွတ်တိုက် ဖြတ်သန်းလာနေ
သော လေအေးတို့ က ကျွန်တော်တို့ ဆီကို အတင်း တိုးဝင် ဖြတ်ကျော် နေပါသည်။ လှိုင်း လုံး ကြီးများကလည်း
လေနှင့်အတူ အရှိန်ပြင်းပြင်း၊ မန်ဟုန် ပြင်းပြင်း ဖြင့်တလိမ့် လိမ့်လိုက်ပါလာပြီး သဲပြင် ပေါ် ရောက်တော့ 
ကျွန်တော်တို့ ၏ ချေကြို ချေကြား ဝယ် တိုးဝင် ပျောက်ကွယ်ကုန်တော့ သည်။
ကျွန်တော် ပို၍ လွတ်လပ် ချင်သောကြောင့်ဖိနပ်တို့ ချွတ်လိုက်မိပါသည်။
စိမ့်အေးသော ပင်လယ် ရေ ဓါတ်က ကျွန်တော့်တစ်ကိုယ်လုံး ကူးစက် ထိုးတက် လာခဲ့ ပါသည်။
သည်တစ်ခါ လာသည့်ခရီးတွင် မြန်မာပြည် အကြောင်း မပြောကြေး ဟု ကတိ ခံ ထားခဲ့ ကြသောကြောင့် 
ဝန်းကျင်ရဲ့အလှ အားလုံးကို လွတ်လပ်စွာပဲ တရှိုက်မက်မက် ခံစား မိခဲ့ ကြပါပြီ။
သည်လို လှပ လတ်ဆတ်မှု လေးတွေ တွေ့လာရတော့ကိုယ့် ရဲ့ အခင်ဆုံး အချစ်ဆုံး သူတွေ၊ တွယ်တာ
ရသူတွေကို သတိရ လာမိတတ်သမို့ဘောင်းဘီထဲ လက်နိူက်ပြီး မိုထရိုလာ ခေါက်ဖုံး လေးကို အထုပ်...
တိုက်ဆိုင်စွာပဲ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက် ဆီမှ ဖုန်းကဝင်လာပါသည်။ ကျွန်တော်ကလည်း သူ့ ကို ဆက်မလို့ ပါ။
“ ဝေး..ကိုကျော်ရေ.... ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ..”
“ ဟာ.. ကျွန်တော်လည်း သတိရလို့ခုပဲ ဆက်တော့ မှာ၊ ကျွန်တော် ကျင်းစန်း ကိုရောက်နေတယ်ဗျ၊ ဗမာလို
ဆိုရင်တော့ရွှေ တောင်ပေါ့ လေ၊ အပြန် ဘဲပြုတ် အရှင်ဝယ်ခဲ့ ရမလား..” ဟု နောက်တော့ ...။
“ သိပ်မကြားရဘူး ကိုကျော်.. လေ သံတွေပဲကြားနေရတယ် ၊ ပင်လယ် လို့ ထင်တာပဲ ၊ညနေ ကျမှ ထပ်ဆက်
တော့ မယ်နော်... ဘိုင့် .....” ဟု သူ နူတ်ဆက် ဖုန်း ချသွား တော့ သည်။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါသည်။ ပင်လယ် အော်သံက ပိုပို ကျယ်လာသလို ထင်ရပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ဖုန်းကို ထုပ်ထားမိပြီးမို့မြန်မာပြည် ကို ဆက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက် မိပါသည်။
ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်လျှင် ကမ္ဘာ ပေါ် တွင် ဈေးအကြီးဆုံး ဖြစ်နေပေမဲ့ လည်း မဆက်ပဲနဲ့ လည်း မနေနိူင်ခဲ့ ပါ။
“ ဟဲလို... ”
“ဟဲ.... ကို.. အလုပ်ထဲက ဆက်တာလား ”
“မဆင်းဘူးကွ ဒီနေ့ ... နေကောင်းကြလားဟေ့ ...”
“ကောင်းပါတယ်၊ ယူ.. ကံကောင်းတယ်နော် မီးမလာတာ နှစ်ရက်ရှိပြီ၊ အခုမှ ပြန်လာကာစလေ၊ နို့ မို့ ဆို ယူ..
“ ရေ ရော ရရဲ့ လား”
“ည နှစ်နာရီလောက် တော့ထ ထ စောင့် ပြီး တင်နေရတယ်.. သူ လာတတ်တဲ့အချိန်လေး မှာလေ”
“ကို.. ပြောလေ.. ဘာပြောမှာလဲ..”
“ ကို... ပြန်လာခဲ့ တော့ မယ်နော်...”
“ဟေ့.. ဖြေလေကွာ..”
“ ကိုရယ်.. ပြန်လာစေချင်တာပေါ့ ... ခိုင် လဲ သိပ်လွမ်းနေရပါတယ်နော်..၊ သိပ် စိတ်ညစ် တာပဲကွာ..”
“ဒီမှာ ခိုင်.. ကိုယ်ပြောမယ်၊ ယူ့ရဲ့မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်းကြီး တွေကို မပြင်သရွေ့ဒို့ တော့ဒီမှာ အသက်တွေ
ကြီးနေရတော့ မှာ.. အတူ နေချင်လို့မိသားစု လေး တစ်ခု ထူထောင်ထားတာကွ၊ အခုတော့...”
“ ကို... ခလေးတွေ ကျောင်းမပြီးသေးဘူးလေ၊ အငယ်ကောင်က ထားတော့ ၊ အကြီးကောင်က အခုမှ ရေကြောင်း
စ တက်ရတာလေ သူ့ ကျောင်း စရိတ်တင် တစ်လ..... ကျောင်းကားခ......”
“ပြီးတော့ပြန်လာရင် ကိုယ်ပဲ ထပ်ပြီးပင်ပန်း ရအုံးမှာ...”
မဟေသီ၏ တုန်တုန်ရီရီ ဖြင့်ရှင်းပြ လာနေသော စကား သံတို့ ကို ကျွန်တော် မကြားတချက်၊ ကြားတစ်ချက်
ဖြစ်လာပါသည်။ ဝယ်ထည့် ထားသည့်အချိန်ပိုင်းဖုံးကဒ် လိုင်းမှ အချိန်ကုန်ကြောင်း အချက်ပေးလာ၍
ကျွန်တော် ဖုန်းကို ကိုင်ပြီး သဲပြင်ပေါ် တွေတွေ ကြီးရပ်နေမိပါသည်။
ထောက်တည်ရာ၊ဆောက်တည်ရာတို့မဲ့သွားသလိုမျိုး ၊ မြစ်ကို အလျား လိုက်ပဲ ဖြတ်ကူး နေရသလိုမျိုး ကြီးပါ။
ကိုင်ထားသော ခေါက်ဖုံးကို ကိုယ့် နားထင်ထဲ အတင်း ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ချင်စိတ်တို့ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့ သည်။
ရပ်နေရင်းနဲ့ လဲ သဲပြင်ထဲ နစ်ဝင် သွား သလိုလိုပါလေ... ။
Posted by ahphyulay at 10:32 PM6comments
Posted by ahphyulay at 11:07 PM6comments
ကောင်း သွားသော မြောက်ဂေါင်း
ဗားတိုက်( အလုပ်သမား၊ဝန်ထန်း အိပ်ဆောင် ) ဝင်း ကို ရောက်တော့လမ်းမီးတိုင်တို့ထိန်ထိန်ညီး အောင်
လင်းနေပေမဲ့တစ်ဝင်းလုံး အိပ်မောကျ နေကြ ၍ ညိမ်ဆိပ် နေပါပြီ။ တောင်ကုန်း ပေါ် ရှိ အင်ဂျင်နီယာ
ဗားတိုက်မှ S.M.E ဦးသန့် ဇင်တို့အိပ်ဆောင်ရှေ့ဝါးကွပ်ပစ် ဆီတွင် မီးလှုံ နေသည့်မီးဖိုမှ မီးခိုးလုံး တစ်လူလူ ထိုးတက်နေသည်ကို ယ္ခု အချိန်ထိ တွေ့ နေရတုံးပင်။ ည ဆယ်နာရီ ထိုးနေပေမဲ့သူတို့အရှိန် ကောင်းတုံး ပါ။
ကျွန်တော်တို့ ကားကြီးဝင်းထဲ ထိုးဆိုက်လိုက်လျင်ပဲ သူတို့အရက်ဝိုင်းမှ ဒန်အိုးတွေ၊ပုလင်းတွေ၊ဇွန်းတွေခေါက်
လိုက်သံ တို့ က လက်ခုပ်သံ တို့ နှင့်အတူပဲ ရောပြီး တစီစီ၊တညံညံ ထွက်လာပါတော့ သည်။ ဒီတစ်ခါတော့ 
ကျွန်တော့် ကို ကြိုလိုက်တာပါ။
“ ဟေ့ အကောင်.. ငကျော်.. ကောင်မလေး ပါလာ လားဟေ့ ..” ဟု ဗိုလ်သန့် ကြီး က မူးသံ ကြီးနှင့်သူတို့ ကုန်း
ပေါ်မှ တဝင်းလုံး ကြားအောင်ကို လှန်းအော်ပါတော့ သည်။ မဟေသီ က ကျွန်တော့် ကို ကွက်ခနဲ လှန်းကြည့် 
ပါသည်။ ဝယ်တာ ဥာဏ်ထွန်းက “ ဟာ.. ဆရာကလဲ.. စကွားတွေ.. မွှား နေ ပါပြီ၊ ကောင်မလေးကို.. လွှတ်လိုက်
အဲရို ရုပ်ပါ...” ဟု ဝင် မ ပါတော့ သည်။
“ ခိုင်..ကလဲကွာ.. ကိုယ်ပြောထားတယ်နော်.. ကိုယ်တို့ တွေက ဒီလိုပါပဲ ဆိုတာ..” မဟေသီ့ကို ကျွန်တော်က
ကပြာပဲ ပြောလိုက်ရပါသည်။ ဟုတ်သည်လေ..၊ တောထဲ တောင်ထဲ အမြဲပဲ အချိန်ကုန်လွန်လေ့ ရှိရသော
ကျွန်တော်တို့ရေနံ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရောက်လေရာ နေရာမှာ ပျော်ပျော်နေတတ်သည့်အလွန်ပဲ ချစ်စရာ
ကောင်းသည့်ဓလေ့စရိုက် များကို သူ့ အား ခေါ်၍ သည်ခရီးကို မစခင်ကတဲက ကြိုတင်ဇာတ်တိုက် ညှိနှိုင်းထား
မီးစက် ဆရာကိုကြီးမောင်ကတော် မဝင်းမေက လာ..လာ ညီမလေး..အမနဲ့ လိုက်ခဲ့ အဆောင်ကို ၊ ဒီသေတ္တာကြီး
တွေ တော့ ထားခဲ့ တော့ ၊နောက်မှ သူတို့ ဖာသာ သူတို့သယ်လိမ့် မယ်.. ဟု ပြောပြီး မဟေသီ့ကို ခေါ်သွားဖို့ 
လုပ်တော့ ..၊ကျွန်တော်က သူတို့ ကို ဂေါင်းညိမ့် ပြလိုက်ရင်း ဗိုလ်သန့် တို့ဝါးကွပ်ပျစ်လေးဆီ လှန်းတက်ဖို့အလုပ် မဟေသီက မျက်နှာငယ်လေးနှင့်သူ့လောင်တော်မင် ကျွန်တော့် ကို “ အကိုနော်.. သိပ်လုပ်မနေနဲ့ အုံး
သူများတစ်ယောက်ထဲ မနေရဲပါဘူး...” ဟု လှန်း မှာရှာ ပါတော့ သည်။
ကျွန်တော်က “အင်းပါ..” ဟု မဟေသီ့ ကို နှစ်သိပ်ပြီး ရောင်းရင်းတွေဘက်ဆီကို ချီတက်ခဲ့ ပါတော့ သည်။
ထိုည က အင်းပါ ဆိုလိုက်သော ကျွန်တော် ကြက်တွန်ချိန် ရောက်ခဲ့ ရပါသည်။
“ ဟေ့ အကောင်.. မင်းအခွက်က ဒီတစ်ခါတော့ဝင်းပြောင်နေပါလားကွ..”
ကျွန်တော်က S.M.E ဦးသန့် ဇင်ကို transfer,movement order, စသည့်( ခရီးသွားအမိန့် ၊ ပြောင်းရွှေ့ လွှာ )
တို့ ကို လှန်းပေးတော့ သူက ကျွန်တော့် ကို ပြန်ပြောလိုက်တာပါ။
“မဟုတ်ဘူး ဆရာ အကြောတင်းချင်လာတာ” ဟု ဥာဏ်ထွန်းက ထပ်ပို့ တော့ “ ဟာ .ဒီအကောင်..ငါ..သယ်..”
ဟု သူ့ ကို ရွယ်လိုက်ရာ သူက “မြောက်ဂေါင်း” အရက် တစ်ခွက်ကို လက်ထဲ ထိုးထည့် လာပါသည်။
ဗိုလ်သန့် က ရုံးစာ တို့ ကို ခေါက်သိမ်းလိုက်ရင်း “ပတပ်ကြော်” ပန်းကန်ကို ကျွန်တော့် အား ကမ်းလာပါသည်။
“ဟေ့ ကောင်.. မိန်းမ ပါလာလို့စည်းဖောက်ပြီး ပြန်ပြေးဘို့ မချောင်းနဲ့ နော်.. နက်ဖြန် ဥာဏ်ထွန်း မင်းအစား
ဆက်ဝင် ပေးလိမ့် မယ်၊ အေး..သူ့ ကိုတော့ဒီည မင်းဂလန်၊ကဆန် မလုပ်နဲ့ ..”ဟုပြောသည်။ အမြီး ပန်းကန်
ကို လှန်းနှိုက်လိုက်မိပေမဲ့ကျွတ်ပြီးရဲနေသော ပတပ်ကြော် အမည်းပန်းကန် ထဲမှာ နှုတ်ခမ်းတို့ဆူနေမည့် 
မဟေသီ့မျက်နှာလေးသာ မြင်မိပါသည်။ မြို ချ မိနေသော “မြောက်ခေါင်း ” ဦးရည် က ခါတိုင်းထက် ပို ပူပြီး
“ပေ ဘယ်လောက်ရောက်သွားပြီလဲ ဆရာ...” ကျွန်တော်က ဗိုလ်သန့် ကိုမေးလိုက်ပါသည်။
“အင်း.. ဒီ ည ဆို ပေ လေးထောင် ကျော် နိူင်တယ် ” ဗူမိဗေဒ ဌာန မှ ကိုသောင်းစိန် က ဝင်ဖြေလာပါသည်။
“ ဒါဆို.. ဆယ့် သုံး လက်မ သုံးမူး ကေဇင်( တွင်း ကာဘာ ပိုက် ) ချတော့မှာပေါ့ ...” ကျွန်တော်က သူ့ ကို ပြန်
ပြော လိုက်ပါသည်။ ထိုတွင်းကာဗာပိုက်များကို ပေ တိမ်မှစ၍ နက်လာသည့်ပေ အတိုင်း လက်မသုံးဆယ်၊လက်
မနှစ်ဆယ်၊ ဆယ့် သုံးလက်မ သုံးမူး၊ ကိုးလက်မ ခြောက်မူး စ သည်ဖြင့် အဆင့် ဆင့်တူးပြီး ချသွားရပါသည်။
ပိုက်လုံးကြီး တစ်လုံးနှင့် တစ်လုံး ဆက်တိုင်း COUPLIN ( အရစ်ဂေါင်း ) ကြီးများဖြင့်လှည့် ကြပ် ၍ ဆက်ပြီး
ချရသော်လည်း ပေ နက်ဖြစ်ပြီး ဝိတ် နှင့် အလုံးပေါင်းများစွာ မြေကြီးထဲ ဆင်းသွားရသောကြောင့်စိတ်ချရစေ
ရန် ကျွန်တော်တို့WELDER (အရပ်အခေါ်..ဝယ်တာ ) တို့ က ထို အရစ်ဂေါင်းများ ကြပ်ပြီးတိုင်း ဂဟေ ထပ်
ကျွန်တော်တို့ရေနံ တူးစက် အမည်က National 55/5 တွင်းတူးစက်ပါ။
ပေနက်တူး စက်လတ် အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ပေပေါင်း ခုနှစ်ထောင် အထိ တူးနိုင်ပါသည်။
ရှာဖွေရေး ဌာန မှ တူးရမည့်နေရာ ကို သတ်မှတ်ထားခဲ့ သည့် နေရာ အရောက် ထိုတွင်းတူးစက်ကြီးကို ကုန်း
တတန်၊ရေတတန် ခရီး အဆင့် ဆင့်တစ်စဆီဖြုတ်၍ အရောက်သယ်ရွှေ့ ရပါသည်။ဒီဇာယ် စက်ခေါင်းအရွယ်
CATARPILOR ဒီဇာယ် အင်ဂျင် ကြီး သုံးလုံးဖြင့်တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ရွှံ့နှင့်ရေ တို့ ကို ရောစပ်ဖျော်
ပြီး Pressure နှင့်တွင်းထဲ ကို မှုတ်သွင်းဘို့အတွက် အားကောင်းသော ပန့် ကြီး( Pump ) များကို မောင်းနှင်နိူင်
ရန်အတွက် တွင်းတူးစဉ်အောက်တွင် နောက်ထပ် CATARPILOR အင်ဂျင် ကြီးများလဲ ရှိနေပါသေးသည်။
တွင်းတူးစဉ်နှင့်နောက်တန်း ဝန်ထမ်းလိုင်း သုံးရန် အတွက် မီးစက် ကြီးလဲရှိနေပါသေးသည်။ ထို အင်ဂျင်စက်
ကြီးများ နှစ်ဆယ့် လေးနာရီ လည်ပတ်နိူင်ရန်အတွက် စက်သုံးဆီ ဂါလံ ပေါင်းများစွာကို အစမ်းတွင်းရှိရာ ဒေသ
အရောက် ကုန်းတတန်၊ရေတတန် ဖြင့်ဆီ တန်ကာ စီဘီ တွဲများ၊ ဆီ ဗောက်ဆာ များဖြင့် အဆင့် ဆင့်အဆက်
မပြတ်ပေးပို့ နေ၇သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရေနံ အစမ်းတွင်း တစ်ခု ထောင်ပြီ ဆိုသည်နှင့်နိူင်ငံတော်မှ
အရင်ဦးဆုံး ငွေ သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်ကျခံ မတည် ရပါတော့ သည်။
စကားတို့ကောင်းနေတုံး အဝေးရှိ မြူတို့ ဖြင့်မှောင်နေသော တောအုပ်ထဲမှ လက်ကနဲ သော ကားမီးရောင်နှင့် 
အတူ သီချင်းအော်ဆိုလာသံ၊ ဆူညံသောစကား ပြောသံ တို့ ကိုပါ ကြားလာ၇ပါသည်။ ည ဆိုင်း (Neight shieft)
ထွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ည ဆယ့် တစ်နာရီ ထိုးသွားပါပြီ။
ကျွန်တော်တို့တွင်းတူး အဖွဲ့ တွင် အင်ဂျင်နီယာ၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ဗူမိ၊ ဓါတု၊လျှပ်စစ်၊ ရေဒီယိုတယ်လီဖုန်း၊
တွင်းတူး၊ စသည်ဖြင့်သူ့ ဌာနနှင့် သူ ရှစ်နာရီ ဆိုင်း သုံးဆိုင်းဖြင့်လှည့် ပတ်နေတတ်သော်လည်း ကျွန်တော်
တို့အင်ဂျင်နီယာ ဌာန ရှိ ကျွန်တော် “ဝယ်တာ” တို့ကတော့အဆိုင်း မရှိပဲ နှစ်ဆယ့် လေးနာရီ စတန်းဘိုင်
ဖြစ်နေရပါသည်။ ဆိုလိုတာက Shieft car နှင့်လိုက်သွားစရာ မလိုပဲ အလုပ်ပေါ်၍ စက်နှင့် လှန်းတက်လာမှ
ကားနှင့်ထ ပြေးရသည့် အလုပ် ဖြစ်ပါသည်။ တူးနေသည့် နေရာနှင့်ဝန်ထမ်း လိုင်းက နှစ်မိုင်ခန့်ထပ်ဝေးပါ
ဗိုလ်သန့် က မယ်ဒလင်ကြိုးကို စ ညှိ နေပါသည်။
ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ၊ “ ဂျင်မလေး ဂျမ်း ” သီချင်း ကို သူ ဟဲ ပါတော့ မည်လို့ ။
ဥာဏ်ထွန်းက မြောက်ခေါင်း နောက်တစ်လုံးကို ဂေါင်းချိုး နေပါသည်။
ကျွန်တော်လည်း ကွပ်ပျစ် ပေါ် ရှိ ပြန့် ကျဲနေသော မြောက်ဂေါင်း ပုလင်းခွံများကို တောင်းကြီး တစ်လုံးထဲ စုထည့် 
လိုက်ပါသည်။ မြူတွေက ပိုမို သိပ်သည်း လာသလို ခံစားရပါသည်။ ရင်ထဲမှာပူလွန်းနေပေမဲ့အပြင်ကတော့ 
အေးလာသလိုပါ။ လေ တစ်မျက် ဝှေ့ လိုက်တော့စိမ့်သွားသလို ဖြစ်လာ၍ စွန်ပျံ ဆေးလိပ် ကို ပါးစောင်တွင်
ကိုက်ပြီး မီးညှိ လိုက်ဖြစ်သည်။
ဆေးလိပ်မီးခိုးတို့ ကို ပိန်းပိန်းပိတ်လာသော မြူမှုံထု ထဲသို့မှုတ်ထုပ်လိုက်ရင်း ဗိုလ်သန့်ဟဲ နေသော “ဂျင်မ
လေးဂျန်း”သီချင်း ကို အလျှင် မီ အောင်လိုက်ခံစားနေမိပါသည်။ အင်း..ကိုမင်းနောင် ကြီးတစ်ယောက် သာ
သိရင် သူ့ ကို လာရောက်ပွေ့ ဖက်နူတ်ဆက်မိမှာ အသေချာ ဟုတွေးမိပါသည်။ သူ့ထက်ကောင်းလို့ ပါ။
အဝေး ကို ငေး နေယင်းက မော်တော်ယာဉ် ဌာန ရှေ့ ကို ကြည့် မိသွားပါသည်။
သေတ္တာ ကြီးနှစ်လုံးပါ။ အလွန်ချမ်းနေသည့်သေတ္တာကြီး နှစ်လုံးပါလို့ ။
ဟင်... ဒါဆို. . မဟေသီ.. ဟိုက်... တုန်နေတော့ မှာပါ။
ကျွန်တော် ဝါးကွပ်ပစ်ပေါ်မှ ကပြာ ဆင်းလိုက်မိတော့ သည်။
“ဟေ့ ရောင်..နောက် ဒဂွက်ရေ...” ဟု ဥာဏ်ထွန်း ပေးလာသော ခွက်ကိုတောင် မယူမိတော့ ပါ။
အင်း ..ငါ့အခန်းက ဘယ်မှာပါလိမ့် .. ဆိုပြီး အရှိန်တို့ ညိမ်အောင် ထိန်းပြီး မဟေသီ ရှိနိူင်မည့်ကုန်း ကလေး
ဆီသို့သုပ်ခြေတင် လာခဲ့ မိတော့ ပါတော့ သည်။
ဟင်းမျိုး ဖြစ်သော လင်းကြက် ကြီးက ကျွန်တော့် ကို တွန် ပြီး အတောင်တဖြတ်ဖြတ်ရိုက်၍ နူတ်ဆက် လိုက်
ပါတော့ သည်..လို့ ။
Posted by ahphyulay at 10:03 PM9comments
သူ နဲ့သာ ဆိုရင်
လှည်းကလေးက သူကြီး အိမ်ရှေ့ ရောက်လာတော့အီရှောင် က ထိုးရပ်ပေးလိုက်ပါသည်။
“ ဗျို့ ..သူကြီး.. ဧည့် သည် ရောက်တယ်ဗျိုး....” အီရှောင် အော်လိုက်တော့အိမ်ပေါ် မှ သူကြီး က ပြူ တင်းပေါက်
မှ ဂေါင်းပြူ ထွက်လာပြီး ငုံ့ ကြည့် ပါသည်။ သူကြီးအိမ်ရှိ တီဗီမှ ည ရှစ်နာရီ သတင်း တီးလုံးသံကို ကြားလိုက်
“ ဟာ.. ကျေးဇူးရှင် လေး.. မင်းမလဲ အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲကွ” သူကြီးက ပြောတာပါ။
“ ထုံးစံ အတိုင်း ဇက်နောက်ကျလို့ ပေါ့ ဗျ။ ဗိုလ် သန့်လာသေးလား” လှည်းပေါ်ကဆင်းလိုက်ရင်း ကျွန်တော်တို့ 
ဌာနမှုး S.M.E ဦးသန့် ဇင် ကိုမေးလိုက်မိပါသည်။ မလာဘူးကွ၊ ဈေးကားပြန်ထွက်ပြီး ဖယ်ရီ ဘုတ် မခွာခင်လေး
ကတော့V.H.F တက်လာတယ်၊ မင်းပါမပါ လှန်းမေးတာပါ.. ဟု သူပြောပါသည်။
“ ဝယ်တာ ကတော်လေးကတော့အချောသားပါလားဟရို့ ... အိမ်ပေါ်ကြွ ခဲ့ ပါအုံး ၊ အကျရည်လေးနဲ့ လဘက်
ရှိတယ်နော်.. လာ..လာ.သမီးလေး ”သူကြီး ကတော် ဒေါ်စံအုန်း က မဟေသီ့ကို လှန်းပြောရင်း အိမ်လှေကား
ကြီး အတိုင်း ဆင်းလာပါသည်။
မြစ်နားဘို့ လယ် ရွာလေးက ဧရာဝတီ မြစ်ကြီး ဘေး ကမ်းနဖူးပေါ်တွင်ပဲ ရှိသောကြောင့်ရွာတန်းရှည်
တလျှောက်ရှိ အိမ်အားလုံးက ခြေတံရှည် အိမ်များသာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်အောက်တွင်တော့နွား တင်းကုတ်များ
ဒေါ်စံအုန်း က သူ့ဝဖိုင့် ဖိုင့်ကိုယ်ကြီးကို မနိူင်မနင်း ထိန်းရင်းပဲ ဆင်းလာသောကြောင့်ကျွန်တော်နှင့် မဟေသီ
အိမ်ပေါ်ရောက်ရောက်ခြင်းပဲ အချိန်မဖြုန်းတော့ ပဲ တစ်ဖက်ကမ်း ပြရည် အစမ်းတွင်းရှိ ဗိုလ်သန့်ဆီကို V.H.F
လှန်းတက်ရတော့ သည်။ R.O ဦးထွန်းမြင့် နိူင်နှင့်တွေ့ တော့ဗိုလ်သန့် တစ်ယောက် ရေလည်ခေါင်ရောက်နေ
ကြောင်း( မူးနေတာကိုပြောတာပါ)၊ ကျွန်တော်နှင့်လဲမည့်ဥာဏ်ထွန်း နှင့် ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြီး သူမှာထား
သောကြောင့်ဖယ်ရီ ဘုတ် ကို သူပဲ စက် နှင့်လှန်းတက်ပေးလိုက်မည် ဟု ပြောတော့ မှ ကျွန်တော်လဲ
သက်ပြင်း ချ ဖြစ်တော့ သည်။
မဟေသီ နှင့်သူကြီး ဦးရွှေ တို့မိသားစုကတော့ရာသီကုန်၊လှောင်ကုန်တွေအကြောင်း ပြောရင်း အဖွဲ့ ကျ နေ
တော့ သည်။ အီရှောင်၏ လှည်း ကမ်းနားဖက်က ပြန်တက်လာရင်း ကျွန်တော့်ကို လက်ပြ နှုတ်ဆက်သွားသည်။
ပစ္စည်းတွေ ဆိပ်ခံ ပေါ်မှာ ထားခဲ့ ကြောင်း ပါ အော်ပြောသွားပါသည်။ သူ ထွက်သွားပြီး မကြာမှီပဲ မှောင်မဲနေ
သောကမ်းတစ်ဖက်ဆီမှ လက် ကနဲ လှန်းတောက်လိုက်သော မီးရောင်ကလေးကို လှစ် ကနဲ မြင်လိုက်ရပါသည်။
ဖယ်ရီဘုတ်ပေါ်ရောက်တော့စလင်ကြီး ဦးရေဝိုင်း က “ ဟေ့ အကောင်.. မောင်ရောင်းတာ အရင်တစ်ယောက်
တုံးကတော့အခုလို မိုးမချုပ်ပါဘူး” ဟု အချွန်နှင့်စ ပြီး မ ပါတော့ သည်။ မဟေသီက တစ်ချက်တော့မျက်နှာ
ပျက်သလို ဖြစ်သွားပေမဲ့သူတို့ ကို ပြန်ပြုံးပြလိုက်ပါသည်။ တစ်လမ်းလုံး သူ့ ကို ဟိုရောက်ရင် ဘယ်သူ ဘာ
ပြောပြော မယုံ ဘို့ ကို ကြိုတင်ပြီး ဘိုကင်လုပ်ခဲ့ ရသည်လေ။
ဘယ်လိုမှ မဟေသီ့ကို စ မရသည့် အဆုံးတော့ မှ ဦးရေဝိုင်း တို့အဖွဲ့လက်လျှော့ သွားပါတော့ သည်။
သူတို့ မျက်နှာပေးတွေကတော့ကျွန်တော့် ကို ဒီတစ်ခါလဲ မင်းနိူင် သွားပြီပေါ့ဆိုသည့်မျက်နှာပေးများနှင့် ပါ။
မြစ်ပြင်တစ်ခုလုံး မှောင်မဲ ညိမ်ဆိပ် နေ ပေမဲ့တုန်ခါ နေသော မော်တော် အင်ဂျင်အသံနှင့်မော်တော်ဦးချွန်မှ
ထိုးခွဲနေသော ရေပွက်၊ရေယက်သံတို့ ကတော့ဖြင့်တခွင်လုံး လျှံကြနေတော့ သည်။
လက်ယန်းတန်းကို မှီပြီး ရှေ့ တူရှု့ ရှိ အမှောင်ထု တွင် ငြိမ်သက်စွာပဲ လဲလျောင်းနေသော တောင်အထပ်ထပ်
ကို ငေးနေသော မဟေသီ့ပုခုံးပေါ်သို့ကျွန်တော် လက်ကလေး အသာတင်လိုက်မိပါသည်။
“ ဘယ် ရည်းစား ကို အလွမ်း ဆုံးလဲ ” ဟု နောက်လိုက်တော့သူ ဟက် ကနဲ ရယ်ပြီး ကျွန်တော့် ကို ဗိုက်ကြော
လှန်းလိမ်ပါတော့ သည်။ ခပ်ဖွဖွ ပါ လို့။
မြစ်ပြင် တလျှောက် လျှပ်တိုက်လာသော လေနုအေးတို့ က ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကို အတင်း တိုးခွေ့ဖြတ်
ကျော်နေကြပါသည်။ အမြဲတန်း လတ်ဆတ်၊လန်းဆန်း နေတတ်သည့်ဧရာဝတီ မြစ်လေ ကလေးပါ။
တဖြည်းဖြည်း နီးလာနေသည့်ပြရည် အစမ်းတွင်း၏ ကမ်းနီ ForeShore မှ ဖွင့် ထားသော တွံတေး သိန်းတံ၏
သီချင်းက နေ နဲ့လ၊ရွှေ နဲ့ မြ တဲ့ ။
ForeShore ကိုရောက်တော့ရေပန့် မောင်း ကိုမြ တို့တစ်ဖွဲ့ လုံး သူတို့ ဗားတိုက် ထဲမှ ထွက်ကြိုနေကြပါသည်။
ကျွန်တော့် ကိုတော့မဟုတ်ပါ။ တစ်ခါဘူးမှ မမြင်ဘူးသေးသည့်ကျွန်တော့်မဟေသီ ကိုပါ။ မဟေသီ ကလဲ
ခရီးပန်းလာပေမဲ့ပတ်ထားသော သဘက်လေးနှင့်နှီး ဦးထုပ် ဝိုင်းဝိုင်း လေးအောက်ရှိ မပျက်သေးသော
ပါးကွက် အလှ လေးနှင့် ပါ။ ကျွန်တော့် ရင်ထဲ ကြည်နူးနေသလိုလို၊ အူတို မိနေသလိုလို ပေါ့ ဗျာ။
သေတ္တာကြီး နှစ်လုံးကလဲ သယ်ပေးမဲ့ သူ များလွန်းတော့ အပြေဆင်၊အဆင်ပြေ ပေါ့ ။
ကမ်းနီ ForeShore မှ ပြရည် အစမ်းတွင်း ရောက်သည် အထိ တောင်ပေါ်ကို နောက်ထပ် ခုနှစ်မိုင် တက်ရပါ
အုံးမည်။ ထို ခုနှစ်မိုင် ဝေးသော ပြရည် အစမ်းတွင်းရှိ တွင်းတူးစက်များနှင့်အလုပ်သမားတွေပါ သုံးဘို့ ဧရာဝတီ
မြစ်ရေကို ရေပန့် မောင်း ကိုမြ တို့ အဖွဲ့ က ရေပန့် တွေနှင့်သည် ကမ်းနီ ရွာ ဆိပ်ခံ မှ တောက်လျှောက်မောင်း
တင်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။တွံတေး သိန်းတန် ကို အလွန်ကြိုက်တတ်တော့ လဲ ရေပန့် တို့မရပ်သလို တွံတေး
သိန်းတန် သီချင်းကလဲ မရပ်တတ်ပါ။ ခေါင်မိုးပေါ် လော် ကြီးတင်မြစ်ပြင်ဖက်လှည့် ၍ ဖွင့် နေတတ်သည်မှာလဲ
သူ့ဝါသနာပါ။ အညာ ဆန် လှေတွေ၊ မော်တော် တွေ ဖြတ်သွား လျှင်လဲ ခုန်ပေါက်မြူး တူး၊ပုဆိုးတွေ ပါမြှောက်
၍ နှုတ်ဆက် တတ်ပါသည်။ သူတို့အဖွဲ့ က ပျော်ပျော် နေတတ်သည့်လူပျော်များ အဖွဲ့ ပါ။
မဟေသီ ပါလာလို့ ပါ။
S.M.E ဦးသန့် ဇင်မှ WA fourwheel drive ကားကြီး လွှတ်ပေးလိုက်၍ မဟေသီနှင့်ကျွန်တော် ဂေါင်းခန်း
ကပဲ လိုက်ရပါတော့ သည်။ နောက်မှာ တွင်းသုံးဘို့ပိုက်လုံး တွေပါ တင်ထားတော့တောတောင်ထဲမှာ သည်
ကားတွေပဲ ဗိုလ် ဆွဲနေတော့ သည်လေ။ လမ်းမှ အကြုံလိုက် ရွာသားတွေလဲ တက်ချင်သလောက် တက်ပေါ့ ။
လမ်းက မြေညှိစက် ကြီးဖြင့် ထိုးညှိ ထားသော မြေသားလမ်း၊မြေနီ လမ်းဖြစ်သောကြောင့်မာဇဒါ ဂျစ် ကဲ့ သို့ 
သော ကားလေး၊ ကားပေါ့များဆိုလျှင် သည် မိုးတွင်းဝယ် စလစ်ဖြစ်ပြီး လာရာလမ်းကိုပြန်လှည့် ရင်လှည့် ၊
သို့မဟုတ် ကပ်နေသော တောင် နံရံ တွေကို တစ်လမ်းလုံး နမ်းနေတတ်ပါသည်။
လမ်းတလျှောက် ကားရှေ့ မီးကြီးအောက် ဖြတ်ဖြတ်ပြေး တတ်သော ရှဉ့်ကလေးတွေ၊ မြွေ ကလေးတွေ၊ ဂျီ
ကလေး တွေကို တွေ့တွေ့နေရတော့မဟေသီက ကျွန်တော့်လက်ကို တစ်ဖွဖွ ဆုပ်နယ်နေရင်း တအံ့ တသြ
ဖြစ်နေတော့ သည်။ ကားကြီး၏ ဂီယာ တွေ အကုန် ထိုးပြီး တအိအိ တက်နေရသော တောင်တွေရှိသလို၊ ဦးဆိုက်
ထိုးဆင်းရသော ဂုံး ဆင်းများကို တွေ့ ရတော့ လဲ မဟေသီ တစ်ယောက် ရင်တို့တဖိုဖို နှင့် ပေါ့ ။
ပုဆင်းရင်ကွဲသံတွေ၊ လေတိုးသံတွေ တော သံ တွေသာ ဖုံးလွှမ်းနေသည့်မိုက်မှောင်လွန်းသော သည်တော
ကြီးထဲမှာ ကျွန်တော် တို့ရေနံ ကားကြီးကတော့မီးခိုး တရဲရဲ နှင့်ခရီးဆက် ကောင်းနေတုံး....။
Posted by ahphyulay at 1:57 PM6comments
ကျွန်တော် ရေနံ အလုပ်သမား ဘဝ ( ၅)
အစတစ်ခု ရဲ့အဆုံးလေး
ကားလမ်း တစ်ဖက်ရှိ ဝါးရုံ တောကြီး ဆီ လယ်ကွင်းပြင်တလျှောက် ဖြတ်သန်း တိုက်ခတ်လာနေသော လေ
ပြင်းတို့အတင်းတိုးဝင်နေသောကြောင့်တဝေါဝေါ လေတိုးသံကြီးက မနားတန်း အော်မြည်နေသော ပုစဉ်း
ရင်ကွဲ အသံ တို့ ကို ဖုံးလွှမ်းအောင်ကြိုးစား နေသလို ဖြစ်နေပါသည်။
မဟေသီက သူ့ ယိုးဒယားခြင်းတောင်းထဲမှာ အသင့် ထည့် လာသော လက်နှိပ်ဓါတ်မီး(ဒေသအခေါ်..ဒုတ်မီး) ကို
နိူက်ယူနေတော့ သည်။ ငါးကြင်းကွက်သို့ သော မီးခိုးရောင် တိမ်တိုက်တို့ က ပြူတစ်တစ် ဖြစ်နေသော လ လေး
ကို တဖြည်းဖြည်း ထပ်မံ ဖုန်းလွှမ်း လို့ လာနေပါသည်။
ကားလမ်းမကြီးနှင့်အပြိုင် ရှေ့ တူရှု့ ရှိ လှည်းလမ်းကြောင်း အဆုံးကို ငေးကြည့်မိနေတုံး မီးနီ ရဲရဲကလေး
တစ်ပွင့် က ရဲကနဲ ပွင့် လာလိုက်၊ ပျောက်သွားလိုက်နှင့်တဖြည်းဖြည်း နီးလာသလို ခံစား ရမိတော့မဟေသီက
ဒုတ်မီးကလေး ကိုင်ရင်း ကျွန်တော့်အနား တိုးကပ်လာတော့ သည်။
ကျွန်တော်လဲ သူ့ လက်ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်ရင်း ကိုက်ထားသည့်စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ကို ထပ်ဖွာလိုက်မိပေမဲ့မီးက
ထိုစဉ်.. အောင်လံဖက်မှ ဆင်းလာသော ကုန်ကားကြီး တစ်စီး၏ မီးရောင်နှင့်စောစောက နေရာကိုပဲ ပြန်ကြည့် 
မိတော့ မှ နွားလှည်း တစ်စီးဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရတော့ သည်။ လေအငြိမ်ကလေးတွင်မှ နွားလှည်း၏ ခလောက်
သံ၊ ခြူ သံ တို့ ကို တဖြည်းဖြည်းကြားလာရပါတော့ သည်။သည်တော့ မှ မဟေသီ လဲ ပြုံးတော်မူပါတော့ သည်။
တောနယ်တို့ ရှိ တချို့ သော နွား တို့ သည် ကိုင်းသိမ်း၊လည်သိမ်း ပြန်လာတိုင်း တနေကုန် နွားလိုပဲ ခိုင်းလာ
သော သူ့ သခင်က လှည်းပေါ်တွင် ပင်ပင်ပန်းပန်း အိပ်ပျော်လာတတ်သော်လည်း ရထားလမ်းတွေ၊ ကားလမ်း
တွေ ကို ဘေးကင်းစွာပဲ အလီလီ ကျော်ဖြတ်၍ အိမ်အရောက် လှည်းကို ဆွဲ ပြန်တတ်လေ့ ရှိသည်ကို ရေနံ
ဝန်ထမ်း ဘဝ နှင့် ပင် ကျွန်တော် အကြိမ်ကြိမ် တွေ့ ဘူးခဲ့ ပါသည်။
ယ္ခု တွေ့ ရသောနွားလှည်းက ဆေးလိပ်မီး တရဲရဲ ဖြစ်နေသောကြောင့်လှည်းဆရာတော့ နိူးနိူးကြားကြား နှင့် 
မီး နီ မှား မဖြတ်ကူးမိအောင် ကိုယ်တိုင်ပဲ မောင်းလာတာ ဖြစ်မှာပေါ့ .. ဟု ပြောလိုက်တော့ မှ မှောင်ထဲမှာပဲ
ပထမဆုံး ရယ်လိုက်သော မဟေသီ့အသံ ကို ကြားရပါတော့ သည်။
ဝါး တပြန်လောက် လှည်း ရောက်လာတော့ မှ သေသေချာချာ ကြည့် ဖြစ် ပါတော့ သည်။
ပြောင်းဖူးဖက် ဆေးလိပ်ကြီးကို ပါးစောင်တွင် ကိုက်ခဲ ထားသော မြစ်နားဘို့ လယ်ရွာသား အိုပက်ကြီး အီရှောင်
ဖြစ်နေပါတော့ သည်။ သူက အောင်လံရှိ ရွှေနှင်းဆီ ပွဲရုံမှ တရုပ် သူဌေး ဦးလူဝကြီး၏ ဒုတိယ မိန်းမ မှ မွေးထား
သော မွေးချင်းထဲမှ နို့ ညှာ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါသည်။ူ( အမေ့ နို့ကို ဒုတိယ တစ်ယောက်မွေးလာသောကြောင့် 
မဝ ပဲ အလှည့် ပေး၍ ညှာလိုက်ရခြင်း၊ အလတ်ကောင် ပေါ့ ဗျာ။)
နို့ ညှာ တို့ က များသောအားဖြင့်ဆိုးတာများတတ်တော့အီရှောင် တစ်ယောက်လဲ အလယ်လွန်၊အပွေးလွန်ပြီး
ဘို့ လယ်သူလေးကို ဖခမည်းတော်ထက်ပိုချစ်လေတော့ဖအေ တားသည့် ကြားထဲက ဘို့ လည် မှာပဲ တလည်
လည်ဖြစ်နေတာကြောင့်သူ့ ကို သူ့ အဖေက အမွေပြတ်စွန့် လွှတ် ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါ၏
အိုပက် ဟု ဘာကြောင့်တွင်၇ပါသနည်း ဆိုသော်.. ကျွန်တော်တို့ရေနံ အဖွဲ့ မှ ပိုလျှံ တတ်သော ဒီဇာယ်၊
ဓါတ်ဆီ များကို ရသလောက်၊နိူင်သလောက် ကောက်ယူ သိုလှောင် တတ်လို့ဖြစ်ပါသည်။
“ ဝေး... အီရှောင်... အိုပက်ကြီး..”
“ကို ရောင်းတာ... ပြန် လာပြီလားဗျ.....” ကျွန်တော်က ရေနံ တွင်းတူး အဖွဲ့ တွင် တစ်တွင်းလုံး မှာ တစ်ယောက်
ထဲ သာရှိသော ဝယ်(လ်)တာ (welder) တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ ပိုက်လုံး များကို ဝယ်လ်ဒင် ဆော်သည့် အလုပ်
ကိုလုပ်သူဖြစ်ပါသည်။ ဝယ်လ်တာ ကို တောသံ၊အရပ်သံနှင့်အလွယ်ပဲအခေါ်များလာတော့ဝယ်တာ ဖြစ်လာ
ပြီး ဆီ ကိုရောင်းတာ များလာတော့ရောင်းတာ ဖြစ်လာပါတော့ သည်လို့ ..။
ဌာန ပေါင်းစုံ ပိုလျှံ ဆီ တွေကို ရောင်းကြပေမဲ့အင်ဂျင်နီယာဌာနတွင် တစ်ယောက်ထဲရှိသူဆိုတော့လူသိလွယ်
“ ဘေးက.. အမေ လား၊အဒေါ်..လား ” အီရှောင်က သိလျှက်နှင့်နောက်လာပါသည်။
“နို့ .. ဘယ်လို ဖြစ်တာတုံး ညကြီး.. ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲဗျ၊ဝယ်တာ လေး...”
“ဇက် က ချော.. မိသွားလို့ ဗျာ..၊ နောက်ကျ သွားတယ်၊ ဈေးကားလဲ မမှီတော့ ဘူး”
“ဟုတ်တယ်..၊ ဖယ်ရီ ဘုတ်လဲ ခွာသွားပြီ ခုလောက်ဆို...”
သူက ပြောရင်း ကျွန်တော် ကမ်းလိုက်သော စွန်ပျံ ဆေးပေါ့ လိပ် အသစ်ကို လှန်းယူရင်း သူ့ပြောင်းဖူးဖက်
“ဟာ..မသောက်ချင်ပါဘူး၊ ခင်ဗျားဟာကြီးက ချိုရဲရဲကြီး ”
“ ကဲ.. အဲ..ဒီက၊ အဒေါ်..အဲ..ကြီးဒေါ်..၊ ကဲကဲ..အမ လေး၊လှည်းပေါ်တက်မယ်နော်.. ခြေမှောင်နေပြီ၊အခုချိန်ဆို
ရှည်ရှည်ကောင်တွေ.. ထွက်နေပြီ...” လို့အီရှောင် နောက်တော့မဟေသီ ကျွန်တော့် နား အသာ ကပ်လာပါ
အီရှောင်နှင့်ကျွန်တော် သေတ္တာကြီးနှစ်လုံး၊နှင့် အဝတ်အိပ်နှစ်လုံး ကို လှည်းပေါ် မ တင်လိုက်ပြီး မဟေသီ့ ကို
တော့ကျွန်တော် ဒုတိယ အကြိမ် ချီ ပြီး လှည်းနောက်ကို တင်ရပါသည်။ အီရှောင်နှင့်ကျွန်တော်က လှည်းရှေ့ 
မှာပါ။ သူ့ဆီမှ နှင်တံ ကို ယူလိုက်တော့ .. အပိုတွေပါဗျာ..၊ဒီကောင်တွေ ဒီအတိုင်း လွှတ် ထားလဲ သူတို့ အိမ်
သူတို့အရောက်ပြန်မှာပါဗျ။.. ဟု စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ကို မီးညှိလိုက်ရင်းက သူပြန်ပြောပါသည်။ မဟေသီက
စောစောကပြောသည့်ရှည်ရှည်ကောင်ကို ကြောက်ပြီး သူ့ ခြေထောက်တွေ အောက်ကို တွဲလောင်းချမထိုင်ရဲ
တော့ ပဲ လှည်းနောက်မှာ ခပ်ပုံ့ ပုံ့ ၊ခပ်ကြုတ်ကြုတ်လေး ထိုင်လျှက်ပါလာတော့ သည်။
လ ကြီးက မီခိုးရောင် တိမ်တောင်တိမ်တိုက် တို့မဖောက်ထွင်းနိူင်တော့ ဖျော့ တော့ တော့လရောင်လေး
အောက်မှာပဲ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး ဘေးတွင်ကပ်ရက်တည်ရှိနေသော မြစ်နားဘို့ လယ်ရွာလေးဆီသို့ကျွန်တော်
တို့နွားလှည်းလေးက လှည်းလမ်းကြောင်းလေးအတိုင်း တလှုပ်လှုပ်နှင့် ပဲ ချီတက်လာခဲ့ တော့ သည်။
ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ကြီးစိုးထားသော ပုစဉ်းရင်ကွဲ တို့ အော်မည်နေသံနှင့်ကျွန်တော်တို့လှည်းကလေး၏
ခလောက်သံ၊ခြူ သံ တို့ က အပြိုင်ပဲ လွင့် ပျံ ထွက်ပေါ် နေပါတော့ သည်။ မြစ်ပြင်ဆီမှ ပြန့် ပြူးသော လယ်ကွင်း
တလျှောက်ကို အဟုန်ပြင်းပြင်းပွတ်တိုက်လာသော လေနုအေးတို့ က တစ်ချက်ချက်၊ အရိုးစိမ့်အောင်ကို အေး
စစ်ချော မိခဲ့ သော ကူးတို့ ဇက်ကြောင့်အဆင့် ဆင့်နောက်ကျခဲ့ ရပြီး ပြည်တောင်တန်းရေနံမြေမှ ကျွန်တော်
တို့ပြရည် ရေနံ အစမ်းတွင်းအတွက် လွှတ်ထားသောဈေးကားလဲ မမှီ၊ မြစ်နားဘို့ လယ် တစ်ဖက်ကမ်း ပြရည်
ဆိပ်ခံ မှ ဈေးကြို ဖယ်ရီ ဘုတ် လဲ မမှီ ဖြစ်ခဲ့ ရသော ကျွန်တော်နှင့် မဟေသီတို့ ၏ တူနှစ်ကိုယ် ချစ်ခရီး အစရဲ့ 
အဆုံး ကတော့ရောက်လာပါပြီလို့ ..။
ဘို့ လည်ရွာ ရောက်မှ သူကြီး အိမ်တွင် ရေနံ အဖွဲ့ မှ တပ်ဆင်ထားသော V.H.F ( ကြိုးမဲ့ စကားပြောစက် ) ဖြင့် 
တစ်ဖက်ကမ်း ပြရည် ForeShore(ဆိပ်ခံ၊ဘော်ယာ) ကို ဖယ်ရီ ဘုတ် တစ်ခေါက်ပြန်လွှတ်ပေးရန် တောင်းဆို
တော့ မည်ဟု စဉ်းစား မိပါသည်။
ရွာ ထဲ လှည်းဝင်လာတော့ခွေးတို့ထိုးဟောင်တော့ သည်။ လူစိမ်း ပါလာလို့ ပါ။
တစ်ရွာလုံး ကူဘိုတာ အင်ဂျင်စက်သံ ညံနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ရေနံ အဖွဲ့ ၏ ကောင်းမှု ပါ။
ဘုရားလဲ မီးလင်းသည်။ ဘောပွဲရုံလဲ မီးလင်းသည်။ အိမ်တိုင်းလဲ မှောင်မနေတော့ ပါ။
ရေနံ အဖွဲ့ကတော့ရောက်လေရာ နေရာတိုင်း ရေနံတော့မထွက်သေးပေမဲ့တစ်ရပ်ရွာ လုံးတော့ဝက်ဝက်
ကွဲ သွားအောင်တော့လင်းသွားတတ်ပါသည်လို့ ။
Posted by ahphyulay at 6:59 AM6comments
ကျွန်တော် ရေနံ အလုပ်သမား ဘဝ ( ၄ )
ဆောင်း သံ တိတ်မှ အိပ်ပါလားကွယ်
ပြည် ဖက်ကမ်းရောက်တော့ညနေ လေးနာရီ ထိုးပြီ။
ကူးတို့ ဇက်က တစ်နာရီ နောက်ကျ၍ နှစ်နာရီခွဲမှ ပြန်ဝင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းကြည့် တော့ 
စစ် ချော ပါသွားသောကြောင့်ဟု သိရသည်။ ခရီး သည်တွေကတော့မြစ်ပြင် ကျယ်ကျယ်ကြီးကို ကြည့် ၍
စိတ်ပျက်ညီးညူ တစ်ယောက်၊တစ်ပေါက်ပြောနေကြသော်လည်း မဟေသီ တစ်ယောက်ကတော့မြစ်ပြင်ကြီး
ကိုပဲ ကြည့် မဝဖြစ်နေပြန်ပါသည်။ နီုး ဦးထုပ် အဝိုင်းကြီးကိုဆောင်းပြီး၊ နေကာမျက်မှန်ကြီး တဝင်းဝင်းနှင့် 
လည်ပင်းမှ ပတ်ထားသော မာဖလာ သဘက် ကလေးကလဲ လေအဟုန်မှာ တလွင့် လွင့်ဆိုတော့သူ့ ကိုယ်
သူ ရုပ်ရှင်ပဲ ရိုက်နေသလိုလို။ ကျွန်တော်လည်း ခံတွင်းချင်လာသောကြောင့်စွန်ပျံ ဆေးပေါ့ လိပ်ကို ထုပ်၍
မီးညှိပြီး အဆုပ်တွင်း သို့တအား ဖွာရှိုက်သွင်းပစ်လိုက်မိယင်း တရွေ့ ရွေ့ဝေးကျန်နေခဲ့ သော ဆင်တဲ ကမ်းနား
ဖက်ကို ပြန်ငေး ကြည့် နေမိပါသည်။
ယ္ခု ဇက် နှင့်မဆန့် သောကြောင့်ကျန်ခဲ့ရှာသော ယာဉ်ကြီး၊ငယ်မျိုးစုံကို ခပ်ပြပြ သာမြင်နေရတော့ သည်။
ကူးတို့ဇက်တို့ ၏ ဦးစားပေး အစီအစဉ်အရ ခရီးသည်ယာဉ်၊စစ်၊ရဲ၊ဌာန ဆိုင်ရာ စသည်ဖြင့်အစဉ်လိုက် ဦးစား
ပေးလေ့ ရှိသောကြောင့်တစ်ခါတလေမှ လာတတ်သော ကားများကတော့တော်တော်လေး ကသီလင်တ ဖြစ်
တတ်ပါသည်။ အဲ... စစ်ချောဟေ့ .. ဆိုလျှင်တော့အားလုံး အလေးပြု ကျန်ခဲ့ ပေတော့ ။
ညနေ လေးနာရီခွဲ လောက်ရောက်တော့မှ ပြည် ဆိပ်ကမ်းကို လှန်း မြင်ရပါတော့ သည်။
ဟင်္သာတ မှ ပြည်သို့ပုသိန်၊မုံရွာ လမ်းမကြီးအတိုင်း မောင်းခဲ့ ရသော ကြာချိန်နီးပါးမျှ ကြာညောင်းတတ်လွန်း
သော သည် ဇက်ကူး ခရီး က နဝဒေး တံတား ကြီး၊မပြီးခင်ကတော့အတော်ပဲ ပျင်းရိ စိတ်ပျက်ဖွယ် အလွန်
ကောင်းခဲ့ တာ အမှန်ပါ။
အဝေးပြေးဂိတ်ရောက်တော့အောင်လံ ကားကို ချိန်းရပါတော့ သည်။
မဟေသီက သူ့ သေတ္တာကြီးထဲမှ မီးသွေးမီးဖိုကြီး ကွဲမှာ စိုးပြီး စပယ်ယာ တို့ ကို တောင်းတောင်းပန်ပန်ပဲ ပြော
နေရှာပါသည်။ ဝန်စည်၊စလယ် အပြည့်နှင့်ခရီး သွားတတ်လွန်းသော ကျွန်တော်တို့ မြန်မာ၊လူမျိုး တို့ ၏
အပို ဒုက္ခ များပါလေ။ လမ်းမှာပဲ ဆင်းမှာဖြစ်သောကြောင့်အလွယ်တကူ၊ ချလို့ရမည့်အပေါက်ဝ တွင်ပဲ ထား
ဖို့စပယ်ယာကို ပြောတော့မဟေသီနှင့်စကားပြောရပါတော့ သည်။
သေတ္တာကြီးတွေကြောင့် ပဲ ကြည်နူး မှုတွေနှင့်စခဲ့ ရသည့်တူနှစ်ကိုယ်ခ၇ီး၏ ဈေးဦးပေါက် မကြည်နူးရခြင်း
ဖြစ်ပါတော့ သည်။ ပြည် အဝင်နောက်ကျခဲ့ သောကြောင့် " ပြရည်" အစမ်းတွင်း မှ ဈေးဝယ်တက်လာသည့် ကား
ကို ကျွန်တော် မမှီ တော့ ပါလေ။ ထို့ ကြောင့်မြစ်နားဘို့ လယ် ရွာ လမ်းဘေးမှာပဲ ကျွန်တော်တို့ဆင်းရတော့ 
ပြည် မှ ထွက်၍ "စကားထောင်ကိုးကွေ့ " ကိုကျော်လာပြီး၊ ဗွက်ကြီး တံတားကို ရောက်လာတော့ဧရာဝတီမြစ်
ကြီး၏ အနောက်ဖက် ရှိ မှိုင်းပြပြ၊ တောင်တန်းတို့ထိပ်တွင် နေလုံး နီနီကြီးက မေးတင်၍ အနားယူတော့ ဖို့ ပြင်
နေပါပြီ။ မဟေသီက ကျွန်တော့် ကို ကြည့် ပြီး မေးငေါ့ လာပါတော့ သည်။ မရောက် သေးဘူးလားပေါ့ ..။
လမ်း ၏ ဘယ်ဖက်ချမ်းရှိ တသွင်သွင်၊ တညိမ့် ညိမ့်နှင့်နေကုန်အောင် စီးဆင်းခဲ့ သော မြစ်ကြီးက ကားလမ်း
နှင့်နီးလာလိုက်၊ ဂျောက် ကမ္ဘားအောက်တွေကို ရောက်သွားလိုက်၊ ကမ်းနှင့်ခပ်ပျပျ သာမြင်နေရသော အဝေး
ဆီကို တဖြည်းဖြည်း ရောက်သွားလိုက် နှင့်မြွေ လိမ်၊မြွေကောက် ကုန်းတက်၊ကုန်းဆင်း ပေါများသော
လမ်းကျဉ်းကျဉ်းလေးအတိုင်း တရွေ့ ရွေ့မောင်းလာသော ကျွန်တော် တို့ ၏ ပြည်၊အောင်လံ ကန်တာ ကား
လေးသည် အမှောင်ထု ကြီး အတွင်းသို့တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်လာတော့မဟေသီ က
ကျွန်တော့် လက်ကို ခပ်ဖွဖွလေး လာဆုပ်ကိုင် ရှာပါတော့ သည်။
သူ့ လက်တွေ ချွေးစ တို့ ဖြင့်နွေး တေးတေး ဖြစ်နေပါပြီ။
သူ့ ဂေါင်း လေးကို အသာပဲ ငဲ့ ၍ ကျွန်တော့်ပုခုံး ပေါ်သို့မှေး ပေးလိုက်မိပါသည်။
“ ကဲ.... ဘို့ လယ်ဆင်း မဲ့သူများ.. ပြင်ထားမယ်နော...... ” စပယ်ယာ၏ အော်သံ ကြားတော့ မှ သူ ဂေါင်းထောင်
ထ ကြည့် တော့ သည်။ စပယ်ယာလေးနှင့်ကျွန်တော် သေတ္တာကြီးတွေကို လမ်းမကြီးပေါ်မှ လမ်းဘေး လှည်း
လမ်းကြောင်း ပေါ်သို့မ ချ လိုက်ပါသည်။
မှောင် စ ပျိုးသည့်တကယ့် တော၏ ရှု့ခင်းပါပဲ။
ပုစင်း ရင်ကွဲ တို့ ၏ အချက်ကျကျ အော်မည်သံ တို့ သာ အမှောင် ထုကို ကြီး စိုးနေပါပြီ။
စပယ်ယာ လေးက ကျွန်တော် တို့ ကို နူတ်ဆက်ပြီး ကားပေါ် ခုန်တက် သွားတော့ကားက မီးခိုးတို့ မဲအောင်
တဗျင်းဗျင်း အသံနှင့်သူ့ ခရီး ကို ဆက်ထွက်သွားတော့လှည်းလမ်းကြောင်းလေးပေါ်မှာ ကျွန်တော်ရယ်၊
မဟေသီရယ်၊ သေတ္တာကြီး နှစ်လုံးရယ်၊ အဝတ်အိပ် နှစ်လုံးရယ်ပဲ ကျန်ခဲ့ပါတော့ သည်။
ဟိုး... အဝေး မြစ်ဖက်ရှိ“ မြစ်နား ဘို့ လယ် ” ရွာလေး ဆီမှ တွံတေး သိန်းတန် သီချင်းသံ သဲ့ သဲ့ ကိုတော့လေ
အဟုန်အတိုင်း ကြားနေရပါသည်။ မဟေသီ့မျက်နှာလေးခပ်ငယ်ငယ်ကို မှောင် ထဲတွင် မကြည့် ပဲ ကျွန်တော်
မြင်နေရတော့စိတ်တို့မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့သူ့ ကို ထားခဲ့ ပြီး ရွာက လူ သွားခေါ်ဘို့ ကလဲ မဖြစ်၊ သူ့ ကို ရွာကို
လွှတ်ပြီး အကြောင်းကြားခိုင်းဘို့ ကလဲ မဖြစ်။ အင်း ခက်တော့ နေပြီ...ဟု။ ကျွန်တော်လည်း ကြံရာမရ ဖြစ်လာပြီး
စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ကို ထုပ်၍ ဖွာရှိုက်လိုက်ဖြစ်တော့ သည်။ ကြားလိုက် ရသည့်တွံတေး သိန်းတံ သီချင်းကတော့ 
“ စောင်း သံ တိတ်မှ... အိပ်ပါလားကွယ်..” တဲ့ ..။
ကျွန်တော့်မှာတော့ဆောင်းကို တီးဘို့နေနေသာသာ ဟန် ကိုယ့် ဘို့အနေနှင့်မှောင်ထဲမှာ ခြင်တွေ တဖုန်း
ဖုန်း ရိုက်နေသော ကျွန်တော့် မဟေသီ ကို ဘယ်လို အားပေးရမှန်းကို မသိနိူင်တော့ ပါလို့ ....။
Posted by ahphyulay at 6:42 AM5comments
ကျွန်တော် ရေနံ အလုပ်သမား ဘဝ ( ၃ )
အိမ်နောက်ဖက် လယ်တီ ကျောင်းဆီမှ တုန်းခေါက်သံ စ ကြားရပါပြီ။ အိမ် အောက်ဖက် ထုပ်တန်းပေါ် တက်
နှပ်နေသော ကြက်မကြီးကလဲ အတောင် တဖြတ်ဖြတ် ရိုက်၍ အလန့် တကြား ထ တွန် ပြန်ပါသည်။ သွပ်မိုးပေါ်
တဖျောက်ဖျောက် ကျနေသော မိုးစက် သံလေး များက ထပ်ပြီး ကွေးချင်သွားအောင်ကိုပဲ စီး ချက်လေးများ
သဖွယ် ဖြစ်လာ၍ တစ်ဖက်လှည့်ပြီး မဟေသီ့ကို စမ်း မိတော့သူ မရှိတော့ ပါလေ။
ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ တုံးခေါက်နေသံက ကျဲ နေရာမှ တဖြည်းဖြည်း စိပ်လာပါသည်။
အောက်ဖက်မီးဖိုဆောင် ဆီမှ ရေစို ထင်းစတို့မီးကျွန်းလောင်နေသည့်မီးခိုးအူသည့်အနံ့က အိမ်အမိုး မျက်နှာ
တို့ ကို ဖြူ လွလွ အခိုးများအဖြစ် အလိပ်လိုက် ဦးတိုက်၍ တစ်အိမ်လုံး ပြန့် နှံ့ မွှန်ထူ လာနေသောကြောင့် 
ကျွန်တော်လည်း ဆက်မနှပ်နိူင်တော့ ပဲ အိမ်အောက်ကို ဆင်းလာခဲ့ မိတော့ သည်။
"ဟော.. ကိုယ်တော်လေး နိူးတော် မူပါပေါ့ လား.. လို့ ၊ မနက် ကားဆင်းဖို့ ရှိတယ်၊ မိုးမချုပ်ပါစေနဲ့ လို့အတန်
တန်မှာလိုက်ရဲ့ နဲ့ရောက်ဖ တွေနဲ့အလေလိုက်နေတာလေ..၊အခု မထနိူင်တော့ ဘူးမှုတ်လား..." မဟေသီက
မီးဖိုချောင်ထဲမှ မီးပြောင်းကို ကုန်းမှုတ်နေရင်းက အဖွားကြီးအိုလေးလိုပဲ တတွတ်တွတ် မြည်တွန် တောက်တီး
ကျွန်တော်လည်း သူ့ ဆီပဲ အရင်သွား၍ သူ့ ကိုပဲ အနမ်း တစ်ပွင့် နှင့်အရင် နှုတ်ဆက်ရန် နောက်မှ သူ့ ခါးလေး
ကို သိုင်းအဖက်၊ မီးပြောင်းနှင့် " ဂေါက်" ကနဲပဲ ကျွန်တော့်လက်ဖျံ ကို ခပ်ဖွဖွ ရိုက်ထုပ်ပါတော့ သည်။
သွား.. စမ်းပါ.. ငညစ်ပတ်ကြီး...၊ အိမ်ရှေ့ မှာ မျက်နှာသစ်ဖို့ .. သူများ အဆင်သင့် လုပ်ထားတယ်၊ရေချိုးရင်
တော့ .. ခပ်သွက်သွက်လုပ်နော်.. ကို..၊ မိုးအေးတယ်သိလား... ဒါမှမဟုတ်..အခုတည်တဲ့ ရေနွေးကိုပဲ .. ခဏ
စောင့် မလား..... ဟု အမေ တစ်ယောက်လိုပဲ စီမံ နေပါတော့ သည်။
အိမ်ရှေ့ ရေကပြင် ထွက်လိုက်တော့ညကရွာထားသော မိုးတို့ ကြောင့်ရေသလျောက်မှ ရေစက်တို့ က ဖွင့် 
ထားသော စဉ့် အိုးထဲ တစ်ပေါက်ပေါက်ကျကောင်းနေတုံး။ တံဆက်မြိတ်အောက် ကွေး နေအောင် နှပ်နေသော
ကျောနက်ကြီးက ထလာပြီး သူ့ တစ်ကိုယ်လုံး ဘယ်ညာ လှုပ်ရန်း၍ တစ်ဖပ်ဖပ်နေအောင်ခါလိုက်ပြီး ကျွန်တော့် 
ကို တအီ..အီ.. နှင့်နှုတ်ဆက်ပါတော့ သည်။ မိန်းမကို ဈေးဦးပေါက် မနမ်းခဲ့ ရပေမဲ့သူ့ ကိုတော့မိန်းမထက်
ဦးအောင်ကိုပဲ ခပ်ဖွဖွ လေးနမ်းလိုက်မိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရည်းစား ဘဝက ပန်းကမ္ဘာ စက်ဘီးလေးနှင့် 
ကောလိပ်ဖက် ထွက်နင်းတိုင်း လျှာလေး တလစ်လစ်နှင့်မမောနိူင်၊မပန်းနိူင်အောင်ကို တကောက်ကောက်
လျှောက်လိုက်တတ်သည့်ဟင်္သာတ မှာ မဟေသီ့ အပြင် နောက်ထပ် တွယ်တာ ရသည့်ခွေးကလေးပါပေ။
အင်း... အခုတော့ .. မင်းတစ်ယောက်ထဲ၊သုံးလ လောက် ကျန်ခဲ့ တော့ မှာ ဟု၊ ရင်ထဲ မကောင်းစွာပဲ တွေးလိုက်
မိပြန်ပါသည်။ ကြီးဒေါ်ကြီးနှင့်သိပ်မတည့် ပေမဲ့သူ့ ကိုတော့ဂရုစိုက်မှာပါလေ..ဟု စဉ်းစားနေတုံးပဲ
" ကလင်လင်......" ဟု ဘဲလ် သံ ပေး၍ ကိုထွေး တို့ ဆိက္ကား နှစ်ဆီး ခြံ ထဲ ထိုးဝင်လာတော့ သည်။
ကျွန်တော်တို့ စီးရသည့် ကားက ဟီနိူး ရိန်းဂျားကားကို ပါကင် အင်ဂျင်တွေလဲ၊ လေးထုပ်တွေ အထပ်ထပ်ပိုး
ထားသည့်အလွန်မြင့် သည့်ခရီးသည်တင် ကုန်ကားကြီးပါ။ ထိုင်ခုံ အောက်မှာခြေထောက်တို့ ချလို့ မရအောင်
ဆန်အိပ်၊ပဲအိပ် ..စသည့်ဝန်ထည်မျိုးစုံ တို့ ကို ကြမ်းခင်း အပြည့်သိပ်ထည့် ထားပြီး၊ အမိုး ပေါ်တွင်လည်း
ဓါတ်တိုင်တို့ဖြတ်ဆွဲထားသည့်ဓါတ်ကြိုးတို့ တောင် မလွတ်ချင်အောင်ကို တောင်ကြီး ကို ထမ်းတင်လာသလို
ဝန်စည်စလယ်တို့ ကို အထပ်ထပ် တင်လာသည့်ကြံတိုင်းအောင် ဆိုသည့်ကားကြီးပါ။ ခြေနင်းမှာလဲ လူတွေ
အပြည့် ။ သူတို့ ကြည့် တော့ လဲ စပယ်ယာတွေ၊ကားသမားတွေ နှင့်တဝါးဝါး၊တဟားဟား အဖွဲ့ ကျလို့ နေသည်။
ကျွန်တော်တို့ လဲ အဖွဲ့ ကျနေပါသည်လို့ ။ မဟေသီနှင့် ပါ။
သေတ္တာကြီးနှစ်လုံးကို သူများမနင်းစေပဲ ကိုယ့် ခုံအောက်ကိုယ်ထားပြီး ကားတစ်စီးထဲပေမဲ့လွတ်မထွက်သွား
အောင် တစ်ယောက်လက်တစ်ယောက် ခပ်ဖွဖွပဲ ကိုင်လာခဲ့ မိကြပါသည်လို့ ။ ပျော် နေတာကို ပြောချင်တာပါ။
တစ်လမ်းလုံးပဲ မဟေသီက.. အကို ရေသောက်မလား၊လ္ဘက်စားအုံးမလား စသည်ဖြင့်တတွတ်တွတ် ကြွေးလာ
ပေမဲ့ .. စားဘူး၊စားဘူး..ပေါ့ လေ..။ ရင်ပြည့် နေတာ၊ရင်ခံနေတာလေ...။
အရင့်အရင် အခေါက်တွေတုံးကတော့သည်လမ်း၊သည်ခရီးတွေကို တစ်ယောက်ထဲပဲ အထီးကျန်စွာ ဟိုငေး
ဒီငေး၊ ကုန်ခဲလှစွာသော အချိန်တို့ ဖြင့်ရောက်ခဲ လှစွာသော ခရီး အထပ်ထပ်တို့ ကို ပျင်းပျင်းရိရိ၊ချောက်
ချောက်ကပ်ကပ်ဖြင့်သွားခဲ့ ရသလောက် ယ္ခု တစ်ခေါက်တွင်တော့နွား ရေကူးသည့်မျက်နှာနှင့် ကျွန်တော်
ကား စ ထွက်တော့မနက် ငါးနာရီ ထိုးပြီ။
ကားဆရာ ကိုကြိုင် က မနိူးသေးတဲ့ သူတို့နိူးအောင်၊ နိူးပြီးတဲ့ သူတွေ ပိုပြီးနိူးကြား သွားအောင် သူ့ ကား အဲယား
ဟွန်းကြီး "တစ် ပွမ်ပွမ် " ဖြင့်တစ်လမ်းလုံး တီးလာပေမဲ့မြို့ ခံ ဓါတ်သိခြင်းမို့ထွက်မဆဲကြပေမဲ့သည်းမခံနိူင်
သည့်ခွေး တို့ ကတော့ခေါင်းထိုးပြီး "တဝုန်း ဝုန်း " ထိုးဟောင် ကုန်ကြပါတော့ သည်။
အလင်းတို့ပွင့်စပြုပြီ။ လယ်တီ ကွင်း အထွက်ရောက်တော့ဆွမ်းခံ ကြွ လာနေ သော သံဃာတန်းကြီး နှင့် 
ကြုံတော့ကိုကြိုင် က သူ့ ကား ကို အရှိန်ရှော့ရပ်လိုက်ပြီး သံဃာတို့ ကို ဦးတိုက်နေတော့ သည်။
မြူ မှုံထု ကို ထိုးဖောက် ထွက်လာသော နေလုံး နီနီ ကြီး က လယ်ကွင်းထဲမှာ မေးတင် ထွက်ပေါ်လာနေတုံး
နီညိုရောင် သံဃာတန်း အရှည်ကြီးကို အရင်ဆုံးပဲ ဖူးတွေ့ လိုက်ရ၍ ကျွန်တော် တို့ လဲ ကြည်ညိုစိတ်၊ကြည်နူး
စိတ် တို့ ဖြင့်ကားပေါ်မှပဲ လက်အုပ်ချီ ရှိခိုး ဖြစ်လိုက်တော့ သည်။
ကျွန်တော်တို့ဟင်္သာတမှ ပြည်ကို တက်မည့် လမ်းက ပဲခူးရိုးမ အနောက်ဖက် ခြမ်း၊ ဖောက်လုပ်ဆဲ ပုသိန်၊ မုံရွာ
လမ်းမကြီး မှ ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ဆင်း၊တောင်တက် တောင်ကျ ချောင်းတို့အလွန်ပေါများလွန်းသည့်ကျောက်
ချော လမ်းမကြီး ဖြစ်ပါသည်။ နွေ ခေါင်ခေါင် ဆိုလျင် ဖုံ အလိမ်းလိမ်း ထ တတ်သလောက် မျက်နှာချင်းဆိုင် မှ
လာသော ကားတို့ တောင် ကောင်းစွာ မမြင်ရတတ်ပေ။ ယ္ခု မိုးတွင်းကာလ၊ ည က မိုးတို့ ရွာ ထား၍ မြေသားတို့ 
သိပ်နေပြီး ဖုံတို့ ကွယ်ပျောက်နေပါသည်။
မြို့ ထွက်လမ်းတလျှောက်၊ လမ်းကကျဉ်း၊ နွားလှည်း၊ဆိုက္ကား၊ ကားပေါင်းစုံ နှင့်ကြက်၊ဝက်၊ခွေး တို့ ကြောင့် 
တစ်လမ်းလုံး အရှိန်ကောင်းကောင်းဖြင့် မမောင်းခဲ့ ရသလောက် အဝေးပြေး လမ်းမကြီး ကို စ တက်ပြီ ဆိုသည်
နှင့်အင်ဂျင်သံ တဗျင်းဗျင်းနှင့်မီခိုး မဲအောင် နင်း မောင်းပါတော့ သည်။
ဒီတစ်ခေါက် တရိပ်ရိပ် ကျန်ခဲ့ သော တောတောင် ရှုခင်းတို့ ကို ကြည့် ရသည်မှာ ပို၍ အသက်ဝင်သလို ဖြစ်နေ
ပါတော့ သည်။ ဘာကြောင့် ဆို အပြင် ငေးကြည့် မိတိုင်း မဟေသီ့မျက်နှာလေးကို နောက်ခံထား၍ တောအလှ
ရှုခင်းတို့ ကို ကြည့် နေရလို့ ပါ။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက်တော့တစ်လမ်းလုံး ဆုပ်ကိုင် လာခဲ့ မိသော လက်
တို့မလွှတ်ခဲ့ မိတော့ ။ သတိရလို့ကြည့် မိတိုင်း နှစ်ယောက်သား ပြုံးရယ် နေမိကြပါသည်။
" ပေါက်တော ရောက်ပြီနော..... "ဟု စပယ်ယာ အော်လိုက် သံကြောင့်ခရီးသည် တွေ တိုးတိုး၊ခွေ့ ခွေ့ဖြင့် 
နောက် ပေါက်ဖက် ကျော်ထွက် ကုန်ကြတော့ သည်။ မဟေ သီ ကတော့မိန်းခလေးအုပ်နှင့်ပါသွားပေမဲ့ 
ကျွန်တော်ကတော့ပြသနာ တက်တော့ သည်။
ဖြစ်ပုံက... သူများတွေလို၊ အမျိုးသမီး များလို တောစပ်၊ခြုံစပ် တွင် ပုဆိုးလေး ကို သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကပ်တင်ပြီး
သေသေသပ်သပ် ဆောင့် ကြောင့် ထိုင်မသွားတတ်တော့ အားကိုးတကြီးနှင့် သွားချင်သည့် ဆီး ကိုစိတ်ရှည်ရှည်
လေး ထားပြီး အပင်ကြီးကို ရှာရင်းနှင့်ကားနှင့်ခပ်ဝေးဝေး အထိ ရောက်သွား တော့ သည်။
စိတ်တိုင်းကျသည့်ကုက္ကိုလ် ပင်ကြီး တစ်ပင် ကို တွေ့ တော့အားတက်သွားမိပြီး ရုက္ခစိုးကို ခွင့် တောင်း ပြီး ဆီး သွားတော့ မည်ဟု စိတ်ကူးလေးနှင့်စိတ်လျှော့ လိုက်ရုံ ရှိသေး " ပွမ်... " ကနဲ ကိုကြိုင် က ဟွန်း တီးလိုက်ပါ
တော့ သည်။ လိုနေသေးသောတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ကျွန်တော့် ကို ပါ။ သူတို့ထွက်တော့ မည် လေ။
အမြန် ပဲ သူတို့ကားကိုကွယ်ရန် အပင်တဖက်ကို ကပ်ပြီး အသာလေး လှည့် ၍ ပုဆိုးကို မ ပြီး ကိစ္စ ကို ရှင်းလိုက်
တော့ မည်ဟု ပြင်လိုက်ခါမှပဲ လမ်းတစ်ဖက်က ဆင်းလာသည့် ကားနှင့်ပက်ပင်းကြီး တိုးပါတော့ သည်။
ကျွန်တော့်အဖြစ်က မဟေသီ လဲ မကယ်နိူင်တော့ ၊ အင်း.. ဖြစ်သမျှ အကြောင်းပေါ့ လေ.. ဟု၊ စိတ်ကို လျှော့ 
ကားပြန်ထွက်တော့မဟေသီက ကျွန်တော့် အဖြစ် ကိုကြည့် ပြီး အထော မသတ်နိူင်အောင် ရယ်နေပါတော့ 
သည်။ " ကိုယ်.. တောထဲ မှာ ဘယ်လို သွားလဲ..ဟင်.." သူ ရယ်ရင်းက ကျွန်တော့် ကို မေးလာတော့"ဟေ့ ...
အိုင်..ကတော့တစ်တောလုံးမှာရှိတဲ့ရုက္ခစိုးကြီးတွေနဲ့ဘော်ဘော် တွေဖြစ်နေပြီ၊ အိုင်..ချီတက်လာပြီဆိုရင်
သူ တို့ မျက်နှာလွှဲနေပြီလေ.. ဟဲ..ဟဲ.." လို့ပြန်ဖြေလို့ အဆုံးပဲ သူ့ဗိုက်ကြော လိမ်အုံးမည့်ပြုတ်တူ လက်
ကလေး ထိုးဝင်လာတာကို လှစ် ကနဲ သိလိုက်၍ ဖမ်း ဆုပ်ရင်း ဘရိတ်အုပ်လိုက်ရပါသည်။
"ယုံပါတယ်နော်.. အကို.. အမေ ခေါ်လို့ခိုင့် တို့ ဆီ စ လာတဲ့ နေ့ က အိမ်သာတက်ချင်တာကို အိမ်မှာ မတက်ပဲ
ပန်းပဲတန်း ကနေ ဟိုး.. တာကလေး အထိ အရောက်ပြန်ပြီး တက်တာလေ၊ ထွက် မကျတာကံကောင်း.."
"ဟေ့ ..ဒါ ကတော့ .. ဒို့ဖင် က မြင့် မြတ်တာကိုး.." ဟု သူ့ ကို ပြန်ပြောမိသည့် အခါတွင်တော့သူ့ ရဲ့ပြုတ်တူ
လက် ကလေးကို ကျွန်တော် မလွတ်နိူင်တော့ ပါ။ ပူ လိုက်တာဗျာ၊ သူ့ရဲ့လိမ် ချက်က၊ ဆီး သာမသွားခဲ့ ရရင်
ကားပေါ် တွင်ပဲ ထွက်ကျ သွားနိူင်ပါသည် လို့ ..။
အုပ်ရှစ်ပင် လမ်းဆုံ ရောက်တော့ကားခဏ နားပါသည်။ ပူ လာသော အင်ဂျင်ကို အအေးခံ ရန်နှင့်လမ်းစုံမှ
လူ ထပ်ခေါ် နိူင်ရန်ပါ။ ကျွန်တော် တို့ လဲ အညောင်း အညာဆန့် နိူင်ရန် ကားအောက် ဆင်း ရတော့ သည်။
ကားနောက် ခြေနင်း က သိပ်မြင့် လွန်းတော့မဟေသီ့ ကို ဂျိုင်းအောက်မှ ခလေး တစ်ယောက်လို ဖေးမ၍
အောက်ကို ကူချ ပေးရပါသည်။ နွား ရေကူးသည့်မျက်နှာ နှင့် ပေါ့ လေ..။
အုပ်ရှစ်ပင် လမ်းဆုံက မြန်အောင်၊ ကြံခင်း၊ ရခိုင် ရိုးမ တို့ ကို အသီးသီး ခွဲ ထွက် သွားသည့်လမ်းဆုံဖြစ်ပါသည်။
အဲဒီက ထမင်းဆိုင်တို့ တွင် တောတွင်းသား၊ တောကောင် အစုံ ရ တတ်ပါသည်။ လမ်းဖောက် အဖွဲ့ မှ လမ်း
ဖောက်လုပ်သားတို့အခြေချ၊ ဖွင့် လှစ် ထားသော ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။
တစ်ယောက်ထဲ သွားလာခဲ့ စဉ်က ပါးစပ် သရမ်း၍ အစုံစား၊ အစုံ သောက်ခဲ့မိသော်လည်း အခုတော့မဟေသီ့ 
ကြောင့်အစုံ မသရမ်းဖြစ်တော့ ပဲ သူ အပင်ပန်းခံ ချက်ခဲ့ သော ထမင်းဂျိုင့် ကြီးပဲ ဖွင့် ဖြစ်ပါတော့ သည်။
ငါးခူကြော်နှပ်ဗျာ၊ သရက်သီးသုပ်ဗျာ၊ နောက် ပုဇွန်ချောက် နိူင်းခြင်းနဲ့လ္ဘက် သုပ်ဗျာ။
ဘာ..တောတွင်းစာ..လဲ၊ လိုပါဘူးနော်လို့ ...။
အချစ်နှင့်ခရီးသွားနေတာလေ..။ ရေ လေး သောက်တာတောင် ချိုနေတာလေ..၊ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကြီးက..ပါ။
ဆင်တဲ ဇက်ဆိပ် ရောက်တော့နေ့ လည် ဆယ့် နှစ်နာရီ ထိုးပြီ။
ဇက်က တစ်နာရီခွဲမှ ရောက် မည်ဆိုသောကြောင့်ကားတွေ အားလုံး သူ့ စုရပ်နှင့် သူ ထိုးဆိုက် အနားယူကုန်
Posted by ahphyulay at 9:58 PM 8 comments
ကျွန်တော် ရေနံ အလုပ်သမား ဘဝ ( ၂ )
ဘူတာရုံ တွင် သင်္ဘောဆိုက်သည်၊
ဆိုက္ကားဆရာ ကိုထွေး အိမ်ဘေးမှ ဖြတ်နင်းသွားတာ တွေ့ လိုက်၍ မနက်ဖြန် မနက် ငါးနာရီ အိမ်ကို လာကြိုရန်
လှန်းအော်လိုက် မိသည်။ သူလည်း အေး.. ပါ..ကွ.. ဟု ပြန်အော်သွားခဲ့ ရင်းက ရန်ကုန် လော်ကယ် ဆိုက်ချိန်
ဖြစ်သောကြောင့်ကမ်းနားဖက် လူကြိုရန် တာလမ်းမ ပေါ် တက်သုတ်ရိုက် အပြင်းနင်းတက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်မှ ဟင်္သာတ ကို ရထားနှင့် များလာခဲ့ လျင် ရန်ကုန်ဖက်ကမ်း သာရဝေါ အထိသာ ရထားရောက်၍
ဟင်္သာတဖက်သို့ကျယ်ပြောလွန်းသော ဧရာဝတီမြစ်ကြီးကို ပဲ့ ထောင်တွေ၊ မော်တော်တွေ၊ သင်္ဘောတွေ နှင့် 
ရင်မောဖွယ်၊ရင်သတ်ရှု့ မောဖွယ်တို့ ဖြင့်ထပ်ကူး ရပါသည်။
ဆန်၊ဆီ အစားအသောက် ပေါလွန်းသော၊ ဗမာပြည် အနုံ့ဟင်္သာတမုန့် ဟင်းခါး လို့ တောင် ဆိုင်းဘုတ်တင်ပြီး
ရောင်းရောင်းနေရသော ထို အလွန်စားကောင်းသည့်မုန့် ဟင်းခါး ရှိရာ ဟင်္သာတမြို့  ကို လာလျင်ဘာကြောင့် 
ရင်မောဖွယ် ဟု ပြောရသနည်းဆိုပါသော် မိုးတွင်း ကာလ များဆိုလျင် ဘိုဘိုဟန် သီချင်းထဲကလို ဘူတာရုံတွင်
သင်္ဘောဆိုက်သလို ဆိုသကဲ့ သို့ဧရာဝတီရေရဲ့တက်ချက် ကတော့တကယ်ပဲ ဒီဇာယ်ခေါင်းကြီး ဘေးအထိ
ရေစပ်စပ်ရောက်တတ်ပါသည်လို့ ..။ စက်ခေါင်းမောင်းတို့ ၏ ခရီးသည်တို့ အပေါ် ထားသည့်တကယ့် စေတနာ
ပါလေ။ မြစ်ပြင်ကြီး ကို ထိုးဖြတ်၍ မောင်းပို့ လို့ ရရင်တောင် ပို့ အုံးမည့် သဘောပါလေ။
ခရီးသည်တွေအတွက်တော့ယ္ခုလို မိုးတွင်း ကာလ တွေဆိုလျင် ပဲ့ ထောင်တွေ၊ မော်တော် လေးတွေ သံလမ်း
နားအထိ ထိုးဆိုက် လူခေါ်လာတတ်၍ အဆင်ပြေနေတတ်သလောက် မရဲတင်းသည့်ခရီးသည်များကျတော့ 
ခပ်လှန်းလှန်း ပေါင်ရင်းမြုတ်သွားသည်အထိ သမ သင်္ဘောကြီးမှ ထိုးချပေးထားသည့်ကုန်းဘောင် ပျဉ်ချပ်တို့ 
ဆီ အရောက် ထပ်လျှောက်ရပြန်ပါသည်။ ထမီတွေ မ၊ ပုဆိုးတွေ မ၊ ခလေးတွေ ရှင်လောင်းလှည့် သလို ဂုတ်
တွေ၊ ပုခုံးတွေပေါ် တင်ပေါ့ ဗျာ။
ထိုအခါမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ လို ယောင်္ကျားသားများကတော့အတော်ကို ရိုင်းပင်းချင်စိတ်ရှိတတ်ပါသည်။
အမျိုးသမီးများကိုပါ။တကယ်ပါ။ကြီးငယ်မဟူ လမ်းလျှောက်တိုင်း တအိအိ၊တညိမ့် ညိမ့်လှုပ်ခါနေတတ်သော
ထို ကုန်းဘောင်ချပ်ကြီးများပေါ်ဝယ် ကိုယ့် ခြေထောက်တွေကို အရင်မြဲမြံအောင် ထိန်းရပ်ပြီး တုံတုံချိချိ ကြောက်
လန့် နေသော အမျိုးသမီး တို့ ကို တွဲကူ ဖေးမ၍ သင်္ဘောပေါ် ချ ပေးခြင်းပါ။
မဟေသီနှင့် စုံဆည်းပြီးသည့် နောက်ပိုင်းတော့ထိုနှေးလွန်းကြာလွန်းသော သမ သင်္ဘောကြီးကိုမစီးဖြစ်တော ။့
အင်ဂျင်နှစ်လုံးပါရက်နှင့်ရေဆန်ကို တစ်လုံးထဲနှင့်ထိုးမောင်းတော့ဟင်္သာတကမ်းကို ပြပြ မြင်နေရ
သလောက် မရောက်နိူင်လွန်းသောကြောင့်ဈေးပိုပေးရသလောက် ပိုမြန်သော အမြန်ပဲ့ ထောင်လေးများကိုပဲ
စီးဖြစ်နေတော့ သည်။ ကုန်ဝိတ်၊လူဝိတ်တို့ နှင့်ဆန့် သလောက်၊ရသလောက် ပြွတ်သိပ် တင်လာတတ်သော
ထို ကူးတို့ ပဲ့ ထောင်တို့ သည် ရေပြင် မှ လက်တစ်ထွာ သာသာလေးသာ ရေစူးကျန်နေတတ်ပါတော့ သည်။
မိုးတွင်းကာလကြီးမှာ ဧရာဝတီမြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးထဲ မြုပ်လု မြုပ်ခင်ဖြင့်တရိပ်ရိပ်ပြေးသော အနီု ပဲ့ ထောင်
လေးတွေပေါ်မှာ ခရီးသည်တွေကတော့ရောက်ချင်ဇောတွေနှင့် ပဲ မလှုပ်မရှက်၊ညိမ်ညိမ် ကုတ်ကုတ် လိုက်ပါ
ရစမြဲပါ။ ထို အခါမျိုးဆိုလျင် ကျွန်တော်နှင့် မဟေသီတို့ က တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက် ကြည့် ပြီး ပြုံး
ရယ် နေ ဖြစ်ကြပါသည်။ ချစ်သူနဲ့ ဆိုတော့ လဲ ... အရာရာကို ပျော်ပျော်ကြီး ကျော်ဖြတ် နေနိူင်သလိုပေါ့ နော်...။
နွေရာသီရောက်လျင်တော့သာရဝေါ ဘူတာနောက်ဖက် ခပ်လှန်းလှန်းရှိ ကမ်းစပ်မှ သင်္ဘောတွေ၊ပဲ့ ထောင်
မော်တော်တွေရှိရာ သို့မတ်စောက်စွာပဲ ဇောက်ထိုး ဆင်းရပါတော့ သည်။ ကမ်းစပ် မြေသားကို လှေကားထစ်
တို့ သဖွယ် ထွင်းထု ပေးထားသော်လည်း အစဉ်မသင့် လျင် အောက်ဖက်ရေစပ်အထိ ဒလိပ်ခေါက်ကွေးပဲ ထိုး
ကျသွားတတ်ပါသည်။ ဆိုလိုချင်တာ... နောက်မှ တစ်ယောက်ကျပြီဟေ့ ဆိုလျင် ရှေ့ ကလူတွေပါ ဆက်ကျသွား
ဘို့မခဲယဉ်းပါဟု...။
ထိုအခါမျိုးမှာ ဆိုလျင်ကောတဲ့ ...။
ကျွန်တော် သူ့ လက်ကို မလွှတ်တတ်တော့ ပါ။
ကြောက်လို့မဟေသီ့လက်ကို မလွှတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ချစ်၍ သူ့လက်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားမိခြင်းပါ။ ချစ်သူ ကျ မှာ စိုးလို့ ပါ။
ရင်မောဖွယ် တို့ ပြောပြီးတော့ရင်သတ် ရှု့ မောဖွယ်တို့ ကို ပြောရပါအုံးမည်လေ။
မြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးထဲရောက်လို့တဖြည်းဖြည်း ဝေးကျန်ခဲ့ သော သာရဝေါ ဖက်ကမ်းကို ပြန်ကြည့် မိလျင် ရန်ကုန်
ထဲက မပျင်းမရိ စီးနင်းလာခဲ့ ရသော ရထားတွဲ အရှည်ကြီးကို ကမ်းနဖူးပေါ်မှာ ဝေးကျန်ခဲ့ သည့် မြင်ကွင်းပါ။
ပြပြသော ကမ်းစပ် တို့ နောက်ခံထားပြီး ဟိုး အဝေးက မှိုင်းညို့ နေသော တောင်တန်းကြီးတွေ ကြည့် ရသည်မှာ
လည်း ရင်ထဲမှာ ကဗျာလိုလို၊ စာလိုလိုပါပဲ..။
ထိုခရီးတွေက ချစ်သူ အဖေါ်ပါလျင် ကြည်နူးရသလောက်၊ တစ်ယောက်ထဲ သွားရသည့်အခါများကျတော့ 
လွမ်းမောဖွယ်၊ စွန့် ပျံ့ ဖွယ်ဖြစ်နေတတ်ပြီး မြင်ရတတ်သည့်ဇင်ယော် တို့ ကတောင် လှောင်နေသလိုလိုပါလို့ ။
" ကဲ... ကို... ဒီ သေတ္တာကြီး ပိတ်ပေးတော့ " နောက်မှ မဟေသီ့အသံကြားမှ အတွေးစ တို့ ပြတ်သွားရသည်။
"လမ်းမှာ..လုံးဝ မဖွင့် တော့ ဘူး ကို .... အသေ ပိတ်ပေး၊ ဟိုကျမှ ဖွင့် တော့ မယ်လေ.." ဟုသူပြောသည်။
ကျွန်တော်လဲ ထင်းရှုးသေတ္တာကြီးကို သံရိုက် ပိတ်ပစ်လိုက်ပါသည်။ ဒီသေတ္တာကြီး တွေကို တစ်လမ်းလုံး ကြုံ
သလို ဖြစ်သလိုနှင့် ပဲ မပါပါအောင် သယ်လာရပါတော့ မည်။
မိန်းမ မပါတုံးကတော့ဘိုင့် ဘိုင် လုပ်ရတုံး ခဏ တာလွမ်းလိုက်ရပေမဲ့ရင်ကော့ ၍ ပေါ့ ပါးစွာပဲ ခရီးတွေ ဆက်
ဖြစ်နေခဲ့ ရသလောက် အခုတော့မဟေသီပါတော့ပျော်ရွှင်ရပေမဲ့မိန်းမ တစ်ယောက်၊သေတ္တာနှစ်လုံးကို
ခရီးတွေ၊အထပ်ထပ်ဖြတ်ပြီး သယ်ရတော့ မှာမို့ ... ကျွန်တော့် နှုတ်မှ ရုတ်တရက်...
" မိန်းမရေ..မိန်းမရဲ့  .......( အာလုပ်သံ၊ပစ်ပစ်နှစ်နှစ်အသံ နှင့် ထွက်ကြည့် ပါ ) ကိုယ်ခေါ်သွားချင်တာက
မင်းတစ်ယောက်ထဲကိုပါပဲ..၊ ဒီ..သေတ္တာကြီးတွေကို မဟုတ်ရပါဘူး..ကွယ်..၊ မင်းပါခဲ့ ရင် အရာရာပဲ ပြည့် စုံလှ
ပါပြီ.... ဒါကြီးတွေကို........" လို့ရုတ်တရက် ထွက်သွားမိပေမဲ့ကျွန်တော့်စကား တို့ မဆုံးခင်မှာပဲ သူ့ ရဲ့ပြုတ်တူ လေးလိုပဲ သန်လှသည့်လက်ကလေးက ကျွန်တော့်နံ အောက် ခါးစောင်းအထက် ဗိုက်၏ အဆီပြင် စ
တင်းနေသည့်နေရာလေးကို လိမ်ညှစ်ပြီးသား ဖြစ်နေပါတော့ သည်။ နာ လိုက်တာဗျာ။ နာ လွန်းလို့ခြေဖျားတို့ 
ထောက်ပြီး သူ့ လက်ကို ဆွဲခွါထုပ်မိသော်လည်း မပြုတ်တော့ ၍ အသံပြဲကြီးနှင့်ခုနှစ်သံချီ ဟစ်ပြီး အနာ သက်
သာ အောင် "အား......"ဟု အော် ထုပ်ပစ်လိုက် စဉ်မှာပဲ သူ့ ကြီးဒေါ် ဒေါ်ကြင်စန်း ဈေးမှ အထုပ်၊အပိုး များဖြင့် 
အိမ်ရှေ့ မှာ ဆိုက္ကားကြီးနှင့်ထိုးဆိုက်လာသောကြောင့်ကျွန်တော် သက်သာရာ အမြန် ရ သွားပါသည်။
"ဟဲ့ ... မိခိုင်... ညီး.. အထုပ်အပိုးပြင်နေတာကလည်း ညကတဲက အခုချိန်ထိ မပြီးနိူင်သေးပါလားအေ...." ဟု
သူ့ ကြီးဒေါ်ကြီးမှ သူ့ ကို ဟောက်ပါတော့ သည်။ ကျွန်တော်လဲ ပုဆိုးပြင်ဝတ်ရင်း ကြီးကြီးလက်ထဲမှ ဈေးထုပ်များ
ကို ဆင်းယူလိုက်ပါသည်။ကျွန်တော့်မဟေသီက သူ့ မိဘနှစ်ပါးလုံး ကျွန်တော်နှင့်အိမ်ထောင်မကျမီ ရှေ့ ဆင့် 
နောက်ဆင့် ပဲ ဆုံးပါးကုန်ကြ၍ သည်ကြီးဒေါ်ကြီး ကပဲ ဆက်လက် စောင့် ရှောက်နေခဲ့ ခြင်း ဖြစ်သည်။
"မဟုတ်ဖူး... ကြီးကြီး သားပေါ့ .. သမီးကို ဘာမှ ကူမလုပ်ပေးချင်ဘူးလေ၊ တမနက်လုံး လ္ဘက်ရည်ဆိုင် ထွက်ဖို့ ပဲ
ချောင်းနေတာ" ဟု ထောင်ပါတော့ သည်။ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ကြားမှာ သူကတော့ခလေး ပေါ့ လေ။
ကျွန်တော် ဆိုက္ကားဆရာ ကိုထွေး ကိုပဲ မနက်လာရင် နောက်တစ်စီး ပါ ထပ်ခေါ် ခဲ့ ဘို့မှာလိုက်တော့ သည်။
မဟေသီ့ပစ္စည်းတွေက ဆိုက္ကား နှစ်စီး နှင့် မှ ရမှာမို့ လို့ ပါလို့ ..။ အင်း.. မနက် ကားဆင်းတဲ့ အချိန် မိုး မရွာပါ
စေနဲ့ ..လို့မျှော်လင့်မိပါသည်။ မနက်ဖြန် မနက်စောစော အလင်းတို့မပွင့် သေးမှီ သေတ္တာကြီး များဖြင့် 
တူနှစ်ကိုယ် ခရီး စ ရတော့ မည်လေ....။
Posted by ahphyulay at 6:34 AM 10 comments
ကျွန်တော် ရေနံ အလုပ်သမား ဘဝ
( ကျွန်တော်နှင့်မဟေသီ )
"မင်းကလဲကွာ ... အိုးတွေ များလိုက်တာ.. တစ်သက်လုံးနေမှာ ကျနေတာပဲ၊သုံးလလောက်လေး ပဲဟာကို"
ကျွန်တော်က ထင်းရှုးပုံးထဲ ကြီးစဉ်ငယ်လိုက်သောဒန်အိုးများကို ထင်းရှုးသေတ္တာပုံးကြီးထဲသို့စီရီကာ နေရာလပ်
မကျန်ရအောင် ထပ်ပြီးထည့် နေသော မဟေသီကို ပြောလိုက်တာပါ။
ငရုပ်သီးမှုန့် ၊ဆနွင်းမှုန့် ကအစ ထောင်းစရာ ငရုပ်ဆုံ၊ငရုပ်ကျဉ်ပွေ့ လက်နီုး တို့ တောင် ပါသေး။ ဒါတောင် ကြက်
သွန်တို့ငံပြာရည်၊ဆီ တို့ ပါ အတင်း ထည့် ယူသွားမည်လုပ်နေသဖြင့်တလမ်းလုံး အလေးခံပြီး သယ်ရတော့ 
မယ်... ဟိုကျမှ ဈေးကားနဲ့လိုက်ဝယ်လို့ ရပါတယ် မယ်မင်းကြီးမရယ်... ဒါလေးတစ်ခုတော့ကိုယ့် ကို လိုက်ရော
ပေးပါကွာ... ဟု သူ့ ကို မနည်းတောင်းပန်မှ နူတ်ခမ်းတို့ပွစိ ပွစိ လုပ်၍ အလျှော့ ပေးတော့ သည်။
ကျွန်တော်က ရေနံ ဝန်ထမ်း တစ်ယောက်ပါ။ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် ဘဝနှင့် တောင်မြောက် သွယ်တန်းနေသော
မြန်မာပြည်မြေပုံအတိုင်း ကုန်စင်အောင် တာဝန်အရ လျှောက်သွားနေရ ပေမဲ့မဟေသီ့ ကို မခေါ်ခဲ့ မိ။ တစ်ခါ
တလေ အရှိန်လွန်၍ မုတ္တမကွေ့  ပင်လယ်ပြင်ထဲ ပါသွားခဲ့ ရလျင် ပိုဆိုးပါသည်။ မိန်းမခေါ်ခွင့်မရှိသောကြောင့် 
ယ္ခု ကျွန်တော် ပြည် အောင်လံ လမ်းပေါ်ရှိ စကားတောင်ကိုးကွေ့ အကျော် မြစ်နားဘို့ လယ်ရွာ လေးမှ မြစ်တစ်
ဖက်ကမ်းရှိ ပြရည် ရေနံ အစမ်းတွင်း ဆီသို့သုံးလတာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အတွက် အလှည့် ကျလာတော့ 
တကျီကျီ ပူဆာလွန်းနေသော သူ့ ကို ခေါ်ဖို့ဖြစ်လာရတော့ သည်။ မခေါ်လို့ ကလဲ မဖြစ်တော့ ။ အိမ်ထောင်
သက် နှစ်နှစ် ပြည့် တော့ မည်။ အမြဲတန်းပဲ သူ့ ကိုထားခဲ့ ၍ အကြိမ်ကြိမ်ခွဲထားခဲ့ တိုင်း စကားနာ အထိုးခံခဲ့ ရ
သည်မှာလဲ အကြိမ်ကြိမ် ရှိနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် ပါ။ S.M.E နှင့်တွင်းတူး အဖွဲ့  တစ်ဖွဲ့လုံး၏ ကျွန်တော့် 
မိန်းမကို တွေ့ ချင်လွန်းလှပါသည် ဟု တစ်ခုတ်တရ ပူဆာလွန်းသောကြောင့် သာ ဒီတစ်ခေါက် မဟေသီ့ကို
ခေါ်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ရခြင်းပါ။
အရင်က ဘာကြောင့်မခေါ်သွားရသနည်းဆိုသော် ကြမ်းတန်းလွန်းသည့်ရေနံ လုပ်သားတို့ ၏ ထုံးစံ အတိုင်း
တောတောင်အနုံ့ location ( တူးမည့် ဝန်းကျင်နေရာ ) ရှိသည့် နေရာ အရောက် ဗားတိုက်တွေ၊တဲတန်းတွေ
ထိုးပြီး စခန်းချ အိပ်စက် နေထိုင်ရလို့ ပါ။ အလုပ်က ပထမ၊နေဘို့ က ဒုတိယလေ။
ဒါပေမဲ့ရေနံသားတို့ လောကတွင်တော့မိန်းမနှင့် လစာ ပါလျင် ဘယ်နေရာမဆို သွားနိူင်သည် ဆိုသော စာဆို
ရှိသည်နှင့် အညီ တခြားသူတွေ အားလုံး မိန်းတွေ၊ခလေးတွေ တိုးလို့ တွဲလောင်းနှင့် ၁၂ လရာသီ နေပူမိုးရွာ
မရှောင် တောအထပ်ထပ်၊တောင်အသွယ်သွယ်ကို ဒရွတ်တိုက် ခေါ်နေခဲ့ ကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ 
လို အဲဒီ တောတွေထဲ မဟေသီ့ ကို ဆွဲမခေါ်ရက်ခဲ့ နိူင်။
ဘာဖြစ်လို့ ဆို....... ချစ်လို့ ပါ။
တန်ဘိုး ထားလွန်လွန်းလို့ ပါလို့ ။
ဒါကြောင့် မို့ချစ်ရက်နဲ့ ပဲ အကြိမ်ကြိမ် ထားခဲ့ ၊ခွဲခဲ့ ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ စစ်သား ဘဝ နှင့်နဲနဲ ပဲ ခြား ပါ သည်။
စစ် မတိုက်ရတာ၊မိုင်းကွင်း မနင်း ရတာ ကလွဲလို့ ပါ။ ဒါတောင် တစ်ခါတလေ စစ်သား တို့ နှင့်ကြောချင်းကပ်
အိပ်ရသည့်အချိန်တွေတောင်ရှိခဲ့ ရပါသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ ဘဝအတွက်တော့နှမ လက်လျှော့နေရစ်တော့ 
ဟု ရင်နာနာနှင့်အကြိမ်ကြိမ် သူ့ ကို ဆိုဖြစ်ခဲ့ ရပါသည်။ နူတ်ဆက်တိုင်း မဟေသီ ငိုခဲ့ ပေမဲ့ကျွန်တော် လှည့် 
မကြည့်ပဲ ထွက်ခဲ့ မိရသည်ကြီးပါ။
ယ္ခု တကြိမ် ကျွန်တော်တို့ ဌာနမှုး S.M.E ဦးသန့် ဇင် ကိုယ်တိုင် မင်းတို့ ကို အဆောင် တစ်ဆောင် စီစဉ်ပေးပါ့ 
မယ်ကွာ.. ငါ့ မိန်းမနဲ့ လဲ အဖေါ် ရတာပေါ့ .. ဟု ပြောလိုက်၍ ကျွန်တော် ကြွတက်ပြီး မဟေသီ့ကို ခေါ်ရခြင်းပါ။
" အကိုရေ.... လာပါအုံး၊ မြန်မြန် ဒီမှာ တိုင်ကီ လာစောင်းပေးပါအုံး.... "
အဝတ်အိပ် ပြင်နေသောကျွန်တော့် ကို နောက်ဖေး မီးဖိုချောင် မှ မဟေသီ လှန်းခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်တော် အဝတ်အိပ် ပစ်ချပြီး သူ့ ဆီ အပြေးရောက်သွားမိတော့ဆန်တိုင်ကီ ကြီးကို မနိူင်မနင်း နှင့်မ စောင်း
ပြီး ငွေရေခွံ အိပ်ဖြဲ၍ ဆန် အကြွင်းအကျန်တို့လောင်းထည့် နေသော မဟေသီ့ ကို တွေ့ လိုက်ရပါသည်။
"မော ပါ့ .. မိန်းမရယ်... မင်းကွာ ပြောထားရက်နဲ့ ၊ အားလုံး ဟိုမှာဝယ်လို့ ရပါတယ်လို့ ၊ ဟင်္သာတ ကနေ ပြရည်
ရောက်တဲ့ အထိ ပြည်မှာ ကားချိန်းရအုံးမယ်။ အခုပဲ အိပ်ယာပစ္စည်းတွေနဲ့သေတ္တာတစ်လုံး၊ မီးဖိုချောင်ပစ္စည်း
တွေက တစ်လုံး ထင်းရှုးသေတ္တာကြီးတွေနော်..၊ အဝတ်အိပ်တွေလဲ ရှိသေး၊ ဟာ.. ဒီဘက်မှာလဲ ရေ ပုလင်းတွေ
ပါလားကွာ .. ဟင်.. မီးသွေး ထုပ်ကလဲ ပါသေး.. ကဲ..ကဲ.. ကိုယ်တို့သင်္ဘောတစ်စီး ပဲ ငှားလိုက်တော့ မယ်ဟေ့ "
ကျွန်တော် ကရားရေလွှတ် တောက်ရှောက် ပြောလို့ မဆုံးခင်ပဲ ကျွန်တော့်ဗိုက်ကြောဆွဲလိမ်ရန် သူ့ လက်
ကလေး ထိုးဝင်လာ၍ မနဲပဲ တွန်းဖယ်လိုက်ရပါသည်။
"ကို က ဘာသိလို့ လဲ.. ဆန်က မိုးတွင်း ဆိုတော့ဒီတိုင်း ထားခဲ့ ရင် ပိုးထိုး၊ မှိုစွဲ ဖြစ်တော့ မယ်။ မီးသွေး က နဲနဲ
လေးကျန်လို့နဲနဲလေး ပိုသယ်ရတာများ၊ နဲနဲ သယ်သွားတော့နဲနဲ သက်သာမသွားဘူးလား၊ ဝယ်ရတာလေ .."
ကျွန်တော် သူ့ ကို ဖက်ပြိုင် မပြောချင်တော့ ၍ အိမ်ရှေ့  ပြန်ထွက်လာတော့စောစောက မီးဖိုချောင် ပစ္စည်းတို့ 
ထည့် ထားသော ထင်ရှုး သေတ္တာကြီး ဘေးတွင် ကပ်ထောင်ထားပြန်သော သနပ်ခါးတုံး များကိုတွေ့ ရပြန်တော့ 
သည်။ မဟေသီက သနပ်ခါး အလွန်ကြိုက်တတ်ပါသည်။ မိုးလင်း မျက်နှာ သစ်ပြီးကတဲက သူ့ ပါးပြင်ဝယ် စွဲထင်
ခဲ့ သည့်ပါးကွက်လေးက ညအိပ်ရာဝင်ချိန်အထိ မပျက်ပျယ်တတ်ပါ။
သူကြိုက်လွန်းသည့်သနပ်ခါးတုံး တို့ ကို ဒီသေတ္တာကြီးထဲ ရှုပ်ထွေးသော ပစ္စည်းတို့ ကြား လေခို၊လေပေါက်တို့ 
မျှ မကျန်မရှိအောင် သူထည့် တော့ မှာမို့ထည့် သလောက် လေးတော့ မည့်ခါးကျိုးအောင်ကို မ ရ တော့ မည့် 
သေတ္တာကြီးကို ကျွန်တော်ကြည့် ပြီး သက်ပြင်းချဖြစ်ပါသည်။
မိဘ တို့ လက်အောက် ဗိုင်းကောက်ကျောက်ပိ တစ်သက်လုံးနေခဲ့ ရသော ကျွန်တော့် မိန်းမ၊ ရေနံသား
ကျွန်တော် ငပွေး နှင့်အကြောင်းပါတော့ မှ အိမ်ပြင်ထွက် တောထဲ ရောက်ရတော့ မှာမို့ အင်း သူ အတွေ့ အကြုံ
မရှိသေးလို့ ပါ၊ နောက် သူ့ ဖာသာ သူသိလာမှာပါ ဟု တွေးရင်း သေတ္တာကြီးနှစ်လုံး၊ အဝတ်အိပ်နှစ်လုံးနှင့် 
မိန်းမ တစ်ယောက်ကို မိုးရေထဲမှာ ဗွက်နင်း၍ တောထဲ အပါခေါ်ရတော့ မည့် မဟာ့ မဟာတာဝန်ကြီးကို စဉ်းစား
မိရင်း စွန်ပျံ ဆေးပေါ့ လိပ် ကို ထုပ်ပြီး မီးညှိ ဖွာရှိုက်လိုက်ဖြစ်ပါတော့ သည်။
Posted by ahphyulay at 8:33 PM 12 comments
မိုးက အခုတလော ဖျောက်ဆိပ်မိုး သာရွာရွာ နေပါသည်။ အိမ်ရှေ့  ဂဝံ မြေနီလမ်းညက်ညက် ပေါ် တဖေါက်
ဖေါက် ကျဆင်းနေသော မိုးစက်ပွင့်တို့ ကြောင့်မြေသင်းရနံ့ သင်းသင်းတို့ က ကျွန်တော့်အိမ်ဝိုင်း လေးထဲ
သို့ပြန့်လွင့် ဝင်ရောက်လာနေပါသည်။ မဟေသီရဲ့ အာရုဏ်ဆွမ်း ထ ချက်သည့်ထမင်းနံ့ မွှေးမွှေးလေးကလည်း
မြေရနံ့ သင်းသင်းလေးနှင့်ရောပြွန်း နေပြီး တစ်အိမ်လုံး ပြန့် နုံ့ လာနေသောကြောင့် သွတ်မိုးတို့ အပေါ်
တဖျောက်ဖျောက်ထိမှန်နေသော မိုးစက်တို့အသံကို နာခံရင်း တစ်ခါပြန်နှပ်ဖို့ကြိုးစားနေသော ကျွန်တော့်မှာ
ဆက်ပြီး ဇွဲ မခတ်နိူင်တော့ ပဲ အိပ်ယာ ထဲမှ ထ ထွက်လာရတော့ သည်။ အပြင်မှာ အလင်းတို့ကောင်းစွာ မပွင့် 
"ဟော့ ..ဒီက... ပဲပြုတ်............"
ပဲပြုတ်သည်ကြီး ဒေါ်အေး ရဲ့  အသံ ပါ။
"ကိုရေ.... လုပ်ပါအုံး.. ဒေါ်အေးကြီးလာနေပြီ.."
နောက်ဖေးမှ မဟေသီ လှန်းအော်လိုက်သောကြောင့်ကျွန်တော်လဲ ပဲပြုတ်ယူရန် အိမ်ပြင် ထွက်ခဲ့ ပါသည်။
အိမ်တံစက်မြိတ်အောက်ရောက်တော့ခြေနင်း အုပ်ခုံပေါ်တွင် အငွေ့ တထောင်းထောင်း ထ နေသော ပဲပြုတ်
တောင်း လေးကို ဖွင့် ၍ ချိန်ခွင်ထဲ ပဲပြုတ် ခတ်ထည့် နေသော ဒေါ်အေးကို သနပ်ခါး ပါးကွက် အဖွေးသားနှင့် 
တွေ့ ရပါသည်။ သူ့ ပါးကွက်တို့ က သွားပွတ်တံ နှင့်တညီ၊တညာ ဆွဲထားပုံရပါသည်။ပါးကွက်ပေါ်ကခြစ်ကြောင်း
တို့ က တိကျ၍ အတန်းလိုက်လေးတွေနှင့် ပဲ စီစီ ရီရီ မို့တစ်မျိုးတော့ ကြည့် လို့ ကောင်းနေပြန်ပါသည်။
" ထုံး စံ အတိုင်းပဲပေါ့ဒေါ်အေးရာ.. နှစ်ဆယ်သား၊ ပို ထည့် ပေးအုံးနော...."
" အေးပါ..တော်..." ဟု သူပြောပြီး ချိန်ခွင်လေး ဆွဲ မလိုက်တော့တကယ်ပဲ ပဲပြုတ် ထည့် သည့် ဗန်းဖက်က
အောက်နိမ့် ကျန်ခဲ့ ပြီး ချိန်ခွင် လျှာကလည်း ပဲပြုတ် ဗန်းဖက် ငိုက် ကျနေတော့ သည်။
" ဒေါ်အေးကြီး.. အဒေါ့် အုန်းဆီလေးက မွှေး လိုက်တာနော်.. ရော့ ..အဒေါ့် အတွက်.."
ဘယ်အချိန်က ရောက်လာမှန်းမသိသော ကျွန်တော့်မဟေသီက ဒေါ်အေးကို သနပ်ခါးပန်းလေးတွေ လာပေး
တာပါ။ "ကျေးဇူးပါတော်... ဒီနေ့ဝက်သား ယူအုံးမလား ညီမလေးရေ.." ဒေါ်အေးက မိုးလင်း၍ ဈေးချိန် ရောက်
ပြန်လျှင်လည်း ဒိုင်မှ လာချသော ဝက်သားတွဲ များကို ယူပြီး မနက်ဈေးထဲ ဆက်ရောင်းပါသည်။
" ယူမယ်လေ.. အဒေါ့်တူ ကိုကျော့်ကိုလွှတ်လိုက်မယ်လေ"
"အေး..အေး.. " ဟု ပြောပြီး ပဲပြုတ်တောင်းလေး ပြန်အုပ်ရင်း ဆက်ထွက်ဖို့ပြင်နေသော ဒေါ်အေးကို မဟေသီ
ကပင် ဆက်၍ " သြော်.. မေ့ တော့ မလို့ .. ဒေါ်အေးရေ... ဆန်ကွဲလေးလဲ နိူင်သလောက် တစ်ခါထဲ ယူသွားအုံး
သမီး တစ်ခါထဲ ထည့် ပေးလိုက်မလို့ " ဟု ပြောပြီး နောက်ဖေးဘက် ကပျာ ပြန်ဝင် သွားတော့ သည်။
"ဒေါ်အေး.... ဦးမောင် တို့ အိမ်ကို ဈေးကွဲရင် လှည့် ဝင်သွားဦးနော်၊ ခြင်ထောင် တွေ လျှော်ဖို့စုထားတယ်လို့ 
ပြောတယ်ဗျ။"ကျွန်တော်က ဒေါ်အေးကို ပြောလိုက်သည်။
"အော်..အေးပါ.." ဟု သူပြန်ပြောပါသည်။
မြင်းပျံ မကောက် ဆေးလိပ်ခုံ ပိုင်ရှင် ရဲ့ ချွေးမ တစ်ယောက်ပါလေ။
သိတဲ့ အတိုင်း မြင်းပျံ ဆေးလိပ် ဆိုတာက တိုင်းကျော်ပြည်ကျော် လူသိများ ကျော်ကြား သည့် ဆေးလိပ် တစ်မျိုး
ပါ။ ဆိုတော့..... ချမ်း သာ ကြသည် ဆိုပါတော့ ။
ဆေးလိပ်ခုံပိုင်ရှင်၏ မွေးချင်းတွေထဲက သားတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်ဦးဝင်းနှင့်ဒေါ်အေး တို့ က ငယ်သူငယ်ချင်း
ငယ်ကျွမ်းဆွေ ဘဝ မှ သမီးရည်းစားဖြစ်ပြီး အိမ်ထောင်ကျ လာခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ဥိးဝင်းက ဒေါ်အေးကို ငယ်ငယ်
ထဲက နိူင်ခဲ့ ရသည့်ငယ်နိူင်ဟု သိရသည်။ သူကသူဌေးသားဆိုတော့ လဲ ခြေလက်တို့ ရှိ အမွှေးတို့ မှ မီးမလောင်
ဘူးခဲ့ အောင် ယောင်္ကျားနုနု ဘဝနှင့်နေခဲ့ ရသူဆိုတော့ ဒေါ်အေးနှင့်အိမ်ထောင်ကျပြီးသည့် အချိန်အထိ အရှိန်
လွန် အကျင့် ပါပြီး အိမ်မှာ ငုတ်တုတ်ထိုင်၍ ရလိုက်သမျှသော အမွေပေါင်း များစွာကို လိုလေးသေးမရှိရအောင်
ကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု ရောင်းချ ပေါင်နုံ ပြီး အပြောင် သုံးခဲ့ သည်မှာ မိန်းခလေး တစ်ယောက်၊ ယောင်္ကျားလေး
ဆယ့် နှစ်ယောက် တိတိ မွေးဖွား သန့် စင်ပြီးစီး သည့်အချိန်အထိ ပါပဲ။
တိုက်တာ အိမ်ခြံတွေ၊ ကားတွေ ကုန်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက်ထဲရောက်လာ၍ အရပ်နှင့်ရ.ဝ.တ အဖွဲ့ က
ဒေါ်အေးကို သနားပြီး ရေစင်ကြီးအောက် အဖီလေး ဆွဲချပြီး ဆောက်လုပ်နေထိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ ရသည်အထိ ပြောင်း
လဲသွားသော်လည်း မပြောင်းလဲပဲ ထူးမခြားနား အဖြစ်နဲ့သစ္စာရှိရှိနေခဲ့ သည်မှာ ဒေါ်အေး၏ လောင်တော်မင်
ဘာကို သစ္စာရှိပါသလဲဆိုတော့ဘောလုံး တစ်သင်းစာ မွေးထုပ်နိူင်လောက်အောင် အိမ်ထောင်တစ်ခုကို
အတည်တကျ ထူထောင်နိူင်ခဲ့ ခြင်းနှင့်အရက်ကို သူဌေး သားဘဝက သောက်သည့် ပုံစံ အတိုင်း နဲနဲလေးမှ
မရော့ ပဲ သောက်နေခဲ့ ခြင်းတို့ ပါ။
ဦးဝင်း မူးလာတိုင်းပြောပြောနေသည့် စကား တစ်ခွန်းက "အေးကို ချစ်သလို ထွေး(ထွေးညို) ကို လဲချစ်ပါတယ် "
တဲ့ လေ ။ သည်စကားလေးတစ်ခွန်း ထဲနှင့် ပင် ဆယ်သုံးယောက်မြောက်သော ခလေး တို့ မွေးဖွား ပြီးသည့် 
အချိန် အထိ ဒေါ်အေး တစ်ယောက် အမော မဖောက်ခဲ့ ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကတော့ဒေါ်အေးကို
ကြည့် ပြီး အမောပေါက်ခဲ့ ရပါသည်။
" ကဲ..ရော့ ..ရော့ ..ဒေါ်အေး.. ဆန်ကွဲ ငါးလုံး လောလောဆယ်ရတယ် ယူသွားတော့ .." လို့မဟေသီ့အသံပေါ်
လာမှ ဒေါ်အေး အကြောင်း အတွေး တို့ ရပ်သွားရသည်။
"သာဓု..ပါတော်..သာဓု၊သာဓု..." ဟု သူပြောရင်း ပဲပြုတ်တောင်းကို ခေါင်းပေါ် စွေ့ ကနဲတင်၊ဆန်ကွဲ အိပ်ကလေး
တစ်ဖက်က ဆွဲပြီး ထွက်သွားသော ဒေါ်အေး နောက်ကျောကို ကျွန်တော်တို့လင်မယား နှစ်ယောက်ကြည့် ၍
ကျန်ခဲ့ ပါတော့ သည်။ မြင်တိုင်း မောရသော ဒေါ်အေး ပါလို့ ။
ကျွန်တော် အငယ်ကောင် ကျောင်းသွားပို့ ပြီး အိမ်ပြန်လာတော့နောက်ဖက်လမ်းရှိ ဦးမောင် တို့ အိမ်ဖက်တွင်
လူတွေ ရုံးစု၊ရုံးစု ဖြစ်နေသောကြောင့်သူတို့အိမ်ဖက် ခပ်သွက်သွက် ဆက်သွားလိုက်မိသည်။
ဦးမောင်တို့ရေကပြင်ရှိ ရေတိုင်ကီ ဘေးကို အသာမှေးစေ၍ နှာနှပ် ပေးနေရသော သတိ မလည်သေးသည့် 
ခြေလက်ဆင်းပြီး ပက်လက်ဖြစ်နေရှာသော ဒေါ်အေးကို တွေ့  လိုက်ရပါသည်။
ဦးမောင် ကတော် ဒေါ်ဌေး က သူခြင်ထောင် ကိုညှစ်နေတုံး ရုတ်တရက် ရှေ့ ကို ငိုက်ငိုက်နဲ့ထိုးလဲသွားလို့ငါလဲ
အိမ်ပေါ်က အမြန် ပြေးဆင်းပြီး ထူလိုက်ရတာလေ.. ဟု ဒေါ်အေး ရဲ့  ဆံစ လေးများကို အသာဖွရင်း ရပ်ခတ်ပေး
လျက်က ကျွန်တော့် ကို သူလှန်းပြောလာပါသည်။
ဒေါ်အေး ရဲ့  အမောတွေက ဒါတင်ပဲလား ဆိုတော့မဟုတ်ပါ။ တစ်နေကုန် အလုပ် မျိုးစုံ တို့လျှောက်လုပ်ပြီး၍
နေညိုချိန် ရောက်လာပြန်တော့ထွေးညိုနှင့် အေး ကိုပါ ချစ်လှပါသည် ဆိုသော သူ့ လောင်တော်မင် ဦးဝင်း
ကို ကျွန်တော်တို့လမ်းထိပ်ရှိ ဘုံဆိုင်ရှေ့ တွင် ထီးတစ်ချောင်း ဂျိုင်းကြားညှပ်ပြီး မပြန်မခြင်း စောင့် ရခြင်းပါ။
တစ်ခါတလေ ဒေါ်အေးတစ်ယောက် ဖျားနာပြီး အလုပ်မလုပ်နိူင်သည့် ရက်များတွင် ဘောလုံး တစ်သင်းစာရှိ
သော ဦးဝင်းတို့ သားအဖ တွေ ဘာလုပ်ကြပါသနည်း ဆိုရပါသော်... အိမ်တွေက ပေးထားသည့်ဆန်ကွဲ တို့ 
ဖြင့်ဆန်ပြုပ်ပြုပ် သောက်ကြသည်တဲ့ ။
ပြုပ်စရာ ဆန်မျှပင် မရှိလျှင်ရော..တဲ့ ၊
ရေ သောက်၍ တညီ၊တညာ ထဲ အိပ်နေကြပါသည် တဲ့ .. ဗျာ။
ဒေါ်ထွေးကို ချော့ ပြီး မေးခဲ့ လို့သိခဲ့ ရတာပါ။ သို့ မို့ ကြောင့်သူ့ ကို ရင်းနီုးရာ အိမ်တိုင်းက သူ့ ယောင်္ကျားနှင့် 
သူ့ သားများ သမီးထွေး လေးတို့ ပါ ဝတ်နိူင်မည့်တစ်ပတ်ရစ် အဝတ်၊အထည်၊ပဆိုး၊ဘောင်းဘီ တို့ ကို စုစောင်း
ပြီး သူ့ကို စုစု ပေးလေ့ ရှိခဲ့ ကြပါသည်။
ခလေးတွေကို သူကျောင်းတော့ ထားခဲ့ ပါသည်။မပြေလည်လွန်းတော့ လဲ...
ကိုမေတ္တာကြီး ပြောသလို ဆယ်တန်းနှင့်ကျောင်းပြီးသည်အထိ မရောက်နိူင်တော့ ပဲ နှစ်တန်းသုံးတန်းတို့ နှင့် 
သာ အဆုံးသတ်ကုန်ကြတော့ သည်။
ခလေးတွေကလည်း တစ်နှစ်တစ်သားကျ မွေးမွေးနေတော့တစ်ချို့ ခလေးများမွေးလျင် သူ့အိမ်က ဘယ်သူမှ
မလိုက်နိူင်။ဒေါ်အေး တစ်ယောက် သူ့ ဖာသာသူ အဝတ်ထုပ်ပြင်၍ ဆေးရုံကို တစ်ယောက်ထဲ ချီတက် လေတော့ 
သူ့ ကို ကြည့် ၍ ကျွန်တော် ရင်မောလွန်းသောကြောင့်ခင်ဗျား.. စစ်ကိုင်းချောင် သွားမလား ကျွန်တော် အားလုံး
တာဝန်ခံမယ်ဗျာ.. ခင်ဗျားအတွက်.. ဟုပြောရာ၊ မလုပ်ပါနဲ့ တော့ငါ့ တူရယ်.. သူတို့ ကို အဒေါ် မပစ်ခဲ့ နိူင်ပါဘူး
ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဒေါ်အေးတို့တို့ နေကောင်းနေသရွေ့ ကတော့လမ်းမပေါ်မှာ နေပူ၊မိုးရွာမရှောင်
မိုးလင်းမိုးချုပ် သနပ်ခါး အဖွေးသားနှင့်တစ်အိမ်တက်ဆင်း ဇယ်ဆက်သလို မမောနိူင်၊မပန်းနိူင်အောင်ရှာဖွေ
သူ့ ကို ကျွန်တော် ကြည့် ၍ ကျောင်းသား ဘဝက ကြားဘူးခဲ့ သည့်ကဗျာ တစ်ပုဒ်ကို သတိရလာမိပါသည်။
"လောကဓံ ၏ ရိုက်နှက် ပုတ်ခတ်မှုတို့ ကြောင့်ငါ့ ဦးခေါင်းထက်တွင် သွေးတို့ ဖြင့်ချင်းချင်းနီနေ၏ သို့ သော်
ဦး ကားမညွှတ်.." ဟုပါ။
ဒီကဗျာ လေးက ဒေါ်အေးအတွက် လို့ ကျွန်တော် ဆိုချင်ပေမဲ့ဒိထက် ပိုသင့် တော်မည့်ခိုင်းနိူင်း စရာလေးကို
ကျွန်တော့်မဟေသီ ကိုမေးကြည့် မိတော့အကိုကလဲ... ဒါများ အလွယ်လေး..တဲ့ ၊ ကဲ ..လင်းစမ်းပါအုံး...
ဘာများလဲလို့ ကွာ... လို့သူ့ ကိုမေးတော့ .. သူ ကျွန်တော့် ကို ပြုံးပြီးပြန်ပြောလာပါသည်။
"ပဒုမ ပေါင်တို "တဲ့ ဗျာ..။
အင်း.. ဒေါ်အေးရဲ့ ဇာတ် က ပေါင်မတိုပေမဲ့လိုက်တော့ လိုက်သား လို့ ကျွန်တော်ထင်မိပါတော့ သည် ခင်ဗျား။
Posted by ahphyulay at 8:04 AM 11 comments
ရေတွင်းကလေး ( ဇာတ်သိမ်းပိုင်း )
" ကဲ.. ပါ. ကိုယ်တော် ရယ်... ကျုပ်ဖာသာ ကျုပ်ခပ်ပါတော့ မယ်၊ တကတဲမှပဲ.. ရေလေးတစ်ပုံး ဆွဲနေလိုက်တာ
များလျှာတစ်လစ်ထွက်နေပြီ ၊ နင့် လျှာကြီး ရေတွင်းထဲပြုတ်ကြတော့ မယ်၊ ဆရာ တပည့်နှစ်ယောက် လျှာ အလှ ပြိုင်နေလိုက်ကြတာများ " အသွဲ့ က ငတိုး ကို ပြောလိုက်တာပါ။
သည်နေ့ တော့အသွဲ့ ကို "ငယ်ကျွမ်းဆွေ " ရုပ်ရှင်ထဲကလို အတူးက အသက်ကို ပြောသည့် အတိုင်း စကားလုံး
လှလှ လေးတွေ ပြောတော့ မယ်လို့သူ ရည်ရွယ်ခဲ့ မိပေမဲ့သူ့ ကို ရုတ်တရက် ခွေးနှင့် နှိုင်းလိုက်သဖြင့် ပြော
့မည့်ခေါင်းစဉ် ပြောင်းရန် ငတိုး ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့ သည်။
တကျီကျီ.. မည်နေသော စက်သီး အသံအတိုင်း အသွဲ့ ကို ပြန်ပက်ချင်သည့်စကားလုံးတွေကလဲ အစီစီ အရီရီ
" ဟာ.... နေစမ်းပါအုံး ဒီမှာ... " ဆိုပြီး ရေတွင်း ဘောင်ပေါ်တင်ထားသည့်သူ့ မြေအိုးထဲသို့ဆွဲပုံးထဲမှ ရေကို
ထည့် ပေးရင်း ငတိုး ပြောလိုက်သည်။ အသွဲ့ က " ဘာလဲ.. မြန်မြန်.. ဒီမှာ ရေတွေ အေးကုန်တော့ မယ်နော် "
ဟု သူ့ ကို ထပ် ကစ်ပြန်သည်။
" အေးပါ..ဟ .." ဟု ပြော တော့ပြုံးစေ့ စေ့မျက်နှာပေးနှင့် ငတိုးကို သူကြည့် နေသည်။
" နင်ငယ်ငယ် တုံးက..."
"ငါတို့ဗန်ဒါသီးတွေ ကောက်ပြီး ခွဲခွဲ စားကြတာလေ. "
" ဒီတော့ .... "
" နင်..ငါ နွှာပေးလိုက်တဲ့ဗန်ဒါ စေ့ တွေ နင့် ဂါဝန်ထဲ ထည့် ပြီး .."
" ပုဆိုး ဝတ်သလို ထုပ်ချီ ပြီး ထွက် ထွက် သွားတာလေ.. ငါ့ ရှေ့ က..."
" ဘာလဲ.. ဟာ... "
" ဟဲ..ဟဲ.. နင် ဘောင်းဘီ ဝတ်လာလို့ .. တော်သေး...." စကား မဆုံးခင် အသွဲ့ရဲ့ဗိုက်ကြော ဆွဲလိမ်မဲ့လက်
ကလေး ရောက်လာ၍ ငတိုး သူ့ ကိုယ်ကို အသာရို့ နောက်ဆုတ် ရှောင်လိုက်ရသည်။
" အစုပ်ပလုပ်တုတ်အကောင်.." ရဲ သောနူတ်ခမ်းတို့ဆူ၍ သူ့ ကို ထောပနာ ပြုတော့ သည်။
" ဒါ ဘာ ဟုတ်သေးလဲ၊ "
" ငတိုး.. နော်.. ငါ သွားတော့ မယ်၊ နင့် အဖွား နဲ့ တိုင်မယ် " ရေ တွင်း မှ ထွက်တော့မည်ပြင်သော အသွဲ့ကို
သူ့မြေအိုးလေးကို လှန်းဖိရင်း ခဏ လေးပါဟု ကပျာ ပြောရသည်။
" နင် .. မျောက် ဖင် နီ ကို တွေ့ ဘူးလား.. သူ့ ဖင်က အမြဲတန်း ရဲ တွတ်နေပြီး ၊ အရည်တစိုစိုနဲ့ယဉ် တလောင်း
လောင်းနဲ့မှို ပွင့် ကြီးလိုပဲလေဟာ.. " အသွဲ့မျက်လုံး တို့အရောင် စ ထွက်လာသည်။
" အဲ ဒါ.. ဟို တုံးက သနပ်ခါးထူထူ၊ နှုတ်ခမ်းနီတရဲရဲ၊ ဇီးထုပ် ဇီးဖတ်တွေ အမြဲပေပွ နေတဲ့နင့် ပါးစပ်လိုပဲ သိလား .. ဟားဟား..."
ရေတွင်းကလေးထဲတွင် ရုတ်ရုတ်၊ သဲသဲ ဖြစ်နေ သော အသွဲ့နှင့် ကျွန်တော့် ကို စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ခုံ ပေါ်မှ
ခုံကလေးတွေကိုယ်စီနှင့်ဖင်စီခံ တွေ တစ်တောက်တောက် ရိုက်သွင်းနေသော ဆေးလိပ်သမတို့လှန်းကြည့် 
ရင်း ပြုံးစိစိ ဖြစ်ကုန်တော့ သည်။
သိပ် မကြာလိုက်၊ လမ်းတစ်ဖက် ရှိ မုန့် ဆိုင်တွင် လာထိုင်နေသော ကြီးဒေါ် ကြီး ကပါ သူတို့အရေးအခင်းကို
မြင်သွား၍ ငတိုးကို လှန်းအော်ပြီး ဟန့်ပါတော့ သည်။ ခွေး ကလေး ငဖြူ ကလည်း ရေတွင်း လေးကို လှည့် ပတ်
ပြေးရင်း တစ်ဝုတ်ဝုတ် နှင့်ထိုး ဟောင်နေတော့ သည်လေ။
အသွဲ့ကလည်း သူ နောက်မလာတော့ ဘူး ဟုပြောပြီး ပြန်ထွက်တော့ မည်လုပ်သောကြောင့်သူ့ ရေအိုးလေး
ကို ဆွဲ ထားရင်းက လာရင်း ကိစ္စ ကို ကပျာကယာပဲ ပြောရပါတော့ သည်။
" ငါ့ ..ငါ့ကို အဖြေ..အဖြေ လေး ပေးပေး ပါအုံး.. "
" ဟဲ့ .. ငကြောင်.. ဘာအဖြေလဲ ဘာတွေ မေးလို့ .. ဖယ်တော့ ဟာ..."
" နင့် ကို ငါ ရည်းစကားပြောနေတာလေဟာ..နင်ကလည်း .."
" အောင်မာ...... ငါ ထင်သားပဲ ၊ဒီလို လာတော့ မယ်လို့ ၊ငနာကောင်၊အေး.. ငါ့အဖြေ လိုချင်ရင် နင်.. တပိုးနဲ့ 
သူများတွေထမ်းသလို ရေထမ်း နိူင်တဲ့နေ့ငါပေးမယ် "
" ကျောင်းဖွင့် လို့ငါပြန်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ.."
" ဒါ နင့် ကိစ္စလေဟာ.. လုပ်ချင်လုပ်၊မလုပ်ချင်နေ၊ ဖယ်တော့ ဟာ......"
သူ့မျက်နှာ ဆူပုတ်လာသောကြောင့်မြေအိုး လေးကို သူ လွှတ်ပေးလိုက်ရင်း အင်း.. ငါ. ငါ့ ဦးလေးထက်တော့ 
သာပြီဟု ငတိုးတစ်ယောက် ကြည်နူးစွာ တွေးလိုက်မိပါတော့ သည်။
ဟေ့ အကောင်.. ခါးကို ကြောက်ကန်ကန်ပြီး တအား မတ်ပြီးတောင့် မထားနဲ့ လေကွာ... ဦးလေး ဖြစ်သူက
ငတိုး ကို ရေထမ်းနည်း သင်ပေး နေတာပါ။ လေး လိုက်သည့်ရေ နှစ်ပုံးဗျာ..၊ တော်တော် လေး ဖိတ်ကျ ၍
တစ်ဝက် စီလောက်ရောက်တော့ မှ နိူင်နိူင်နင်းနင်း ဖြစ်သွားတော့ သည်။
ရေ စ ပြီး ထမ်းကာစက ရေနှစ်ပုံး ဝိတ်ကို တပိုးနှင့် ပင့် ပြီး ပုခုံး နှင့်ထိမ်းလိုက်နိူင်သော်လည်း တစ်လှန်းနှစ်လှန်း
လှန်း ရုံရှိသေး ၊မနိူင့် တနိူင်နှင့် ယိမ်းယိုင် လာသည့်ခန္ဒာကိုယ်ကြောင့်ရေအထန်းကြီးကို အလန့် တကြားဖြင့် 
ခါး ကို လိမ်ပြီး တပိုး ညွှတ်ပြီး လှုပ်နေတဲ့ အတိုင်း ခပ်သွက်သွက်လျှောက်ကွ ၊ ဘေးက ဦးလေးပြောသည့် အတိုင်း
ရေတွင်းကလေးမှာ အကြိမ်ကြိမ် ရီဟာဆယ် အလုပ်ကောင်း နေသောကြောင့် အဖွားပေးသော ရေခတ် နောက်
ကျသည့်အပစ်ကို တူဝရီး နှစ်ယောက် ထိုနေ့ က ရရှိခဲ့ ပါသည်။ နေ့ လည် စာ အငတ်ထားခြင်းပါ။
အင်း... ယောင်္ကျား တို့ တတ်အပ်တဲ့အဌာရဿ ဆယ့် ရှစ်ရပ်မှာ ရေခတ်တာလဲ ပါမှာပဲ ဟု ငတိုး ဆာဆာနှင့် ပဲ
တွေးခဲ့ မိပါသည်။
သင်္ကြန် ကျတော့ မည်။ ဦးလေး တို့ကလသား တစ်သိုက်ကတော့သူတို့စုငှားထားသည့်သုံးဘီး ကားလေး
ကို ဆန်ကော ဝိုင်းကြီးတွေ ကပ်၊ ဖျာကြမ်းတွေ ပတ်ပြီး ပန်းချီ တွေ၊ ပုံတွေ ဆွဲ ရင်း အလုပ်ရှုပ်နေကြသည်။
ကျော်ဟိန်းပုံကတော့အထင်းသားပါ။ သုံးဘီးက ဆိုင်ကယ်ဟန်တယ်လ် နှင့် ရန်ကုန် က နှင်လိုက်သည့်သုံးဘီး
ငတိုး တစ်ယောက်ကတော့ခါတိုင်းနှစ်လို ခွက်စောင်းခုတ်ရန် နိူ့ ဆီခွက် မရှာတော့ ပဲ အသွဲ့ ကို မဟာဆန်ဆန်
ဖလားလေးနှင့် ပဲ လောင်းတော့ မည်ဟု။ ယ္ခုတော့ .. တာလမ်းကို ငဖြူလေးနှင့် အခေါက်ခေါက်အခါခါဖြတ်ကူး
ပြီး ရေထမ်းလေ့ ကျင့် နေတုံး။ အဖွားတို့ ကတော့ပြောင်းလဲသွားသော ငတိုးကို ကြည့် ပြီး တပြုံးပြုံးပေါ့ လေ။
ထိုနေ့ ... ထိုနေ့ ကလေးပေါ့ လေ..။
ငတိုး ခြေထောက်တွေ မြဲမြံလာတဲ့ နေ့ ၊
ရေထမ်းကို မယိမ်းမယိုင်ပဲ အထိန်းအသိန်းနိူင်စွာ စ ထိမ်းနိူင်သည့် နေ့ မှာပေါ့ လေ။
ရေတွင်းကလေးထဲမှ ရေအပြည့် နှစ်ပုံးကို ထမ်းပြီး တာလမ်းကို ခပ်သွက်သွက်ဖြတ်ကူးဘို့ အထွက် သူ့ငဖြူလေး
ကလည်း ဘေးကနေ သူနှင့်လမ်းကိုဖြတ်အကူး...၊
တာကြီးကုန်းပေါ်မှ ကုန်ဝိတ်လူဝိတ်အပြည့် နှင့်ထိုးဆင်းလာသော " ဝ တစ်လုံး "ကုန်ကားကြီး နှင့်သူတို့ ပက်
ပင်း တိုးပါလေတော့ သည်။ ငဖြူလေးက ကားဘီးအောက်မှ အမြီးလေးကုတ်ခါ ဖြွတ် ကနဲ လွတ်ထွက်သွားပေ
မဲ့ရေထန်းဝိတ်နှင့်ငတိုးကတော့ကတော့ မလွတ်တော့ ..။
" ဝတစ်လုံး " ကားဂေါင်းကြီး ကို နောက်ဆုံး အကြိမ်အဖြစ်ကြည့် ရင်း ကိုယ်သွားပြီ အသွဲ့ ရေ... ဟု ။
ကား ဘရိတ် အုပ်လိုက်သံ၊ ဆေးလိပ်ခုံမှ အလုပ်သမတို့အလန့် တကြားအော်သံနှင့် ကားတာယာနှင့်တာလမ်း
တို့ပွတ်တိုက်လိုက်သံ တို့ က တာကလေးရပ်တစ်ခုလုံး ပွက်ပွက်ဆူသွားပါတော့ သည်။
ထိုနေ့ က ငတိုး မသွားခဲ့ ရပါ။
တကယ် ထွက်သွားခဲ့ ရသည်က... ငတိုး ရဲ့ အသွဲ့ ပါပဲ..။
တာကြီးကုန်းရဲ့တစ်ဖက်အဆင်း မိုင်ဒါဈေးဖက် ဆိုက္ကားနှင့်ဈေးအဝယ်ထွက်သွားသော အသွဲ့ စီးသွားသည့် 
ဆိုက္ကားကို ကုန်းပေါ်မှ ဆင်းသွားသော ကုန်ကားက ဘရိတ်မမိပဲ တိုက်မိသွားခြင်းပါလေ...။
တိုက်ဆိုင်သွားတာကတော့ငတိုးနှင့်ဟိုဖက်ကုန်း၊ဒီဖက်ကုန်း တစ်ချိန်ထဲဖြစ်ခဲ့ ရခြင်းပါပဲ။
အမေ စော လက်ထဲ ထင်းစလေးတွေ ထည့် ပေးရင်း ငတိုးမြင်ကွင်းတွေ ဝေဝါးနေသည်။ လိမ့် ထွက်ကျချင်လာ
သော မျက်ရည်ဥ တို့ ကို ငတိုး မျက်တောင်အကြိမ်ကြိမ်ပုတ်ခတ်ပြန်တင်ဘို့ ကြိုးစားရင်း မျက်ရည်ဝဲနေသော
အသွဲ့ ရဲ့ အမေ အမေစောနှင့်မျက်နှာခြင်း ဆိုင်ဖြစ်တော့ သည်။
တာလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ တန်းစီနေသော သင်္ကြန်ကားတွေ၊ ရေကစားနေသူတွေကို အိမ်ပေါ်မှာ ငတိုးတစ်ယောက်
ငဖြူ လေးနှင့် ပူးထိုင်ပြီး ငေးကြည့် နေမိသည်။လက်တစ်ဖက်က ဖလားလေးကိုင်၊တစ်ဖက်က ငဖြူလေးကို
ရေတွင်းကလေးမှာတော့ရေပက်ရန်၊ရေခတ်ရန် လူတွေ တရုံးရုံးနှင့် ပါ။
သူတို့ ဆီမှ လတ်ဆတ်၊လန်းဆန်းနေသော သင်္ကြန်ရနံ့ လေးက ငတိုး တို့ ဆီ လွင့် ပျံ လာနေပါတော့ သည်။
Posted by ahphyulay at 3:55 PM6comments
ရေတွင်းကလေး ( တတိယ )
အသွဲ့ တို့အိမ်က ငတိုးတို့အိမ်ဝိုင်းနှင့်ရွှေင်္ဟသာ ဆီစက်ကြားရှိ ဖွဲလမ်းကြားထဲတွင် ဖြစ်ပါသည်။
သူတို့ က ဖွဲလမ်းကြားထဲရှိ သူတို့ ၏အိမ်ရှေ့ တွင် မနက်တိုင်း မုန့် ပစ်သလက်၊ မုန့် လင်မယား နှင့်ဘိန်းမုန့် တို့ ကို လုပ်ရောင်းလေတော့ငတိုးတစ်ယောက် ရွာရိုးကိုးပေါက် ရှောက်လည်ရင်း ဗိုက်ဆာလို့အိမ်ပြန်လာတိုင်း
လက်ဗလာ ပြန်လာလေ့ မရှိပဲ ချိုင်မိချိုင်ရာ သစ်ကိုင်း ကျိုး၊သစ်ကိုင်းေ ခြာက်တပွေ့ ၊တပိုက၊် တော့ ပြန်ပိုက်
လာရင်း အသွဲ့ တို့ အမေ အမေစော လက်ထဲ ဝင်ထည့် ပေးလေ့ ရှိခဲ့ ပါသည်။ဒါကြောင့် မို့ လဲ သူအလွန် နှစ်ခြိုက်
ခဲ့ သည့်နှမ်းထောင်းရနံ့ သင်းသင်းလေးနှင့်မုန့် ပစ်သလက်အဖြူ လေးကို ကျောင်းပိတ်ရက် တစ်နွေလုံး အမေစောက ငတိုးကို အလကားကြွေး နေခဲ့ ပါသည။်
အသွဲ့ တို့ ရဲ့မုန့် ပစ်သလက် အဖြူ လေးကို တစ်နွေလုံး သူအလကားစားနေရင်းက ငတိုးအဖွား၏ ပြားချပ် နေ
သော ဘော်လီရှင်မီးအင်္ကျီထဲမှ သူ့ အဖွားနှိုက် နှိုက်ပေး နေခဲ့ သော မနက်စာမုန့် ဖိုး အကြွေ စ လေးများကို
စုစောင်းရင်း မျောက် တို့ ရှုံးသွားအောင် ဆော့ ကစားနိူင်သည့်လက်နက်ကရိယာများဖြစ်သော လေးဂွတို့ ၊
နေကုန်သွားအောင် လွှတ်လို့ ရသည့်စွန် များနှင့် ရစ်လုံးတို့ ကို သူ ဝယ်ယူ ဖြည့် တင်းနိူင်ခဲ့ ပါသည်။
သည်နေ့ တော့အဖွားတို့အိမ်ဝိုင်း နောက်ထဲရှိ စပါးလှန်းသည့်သံမံတလင်း ထဲတွင် အသွဲ့ကို စွန် ထိုးပေး
ဘို့ချော့ ခေါ်သွားရင်း ရထားလမ်း တစ်ဖက် လည်ကွင်းထဲမှ ပြန့် လွင့် လာနေသည့်ဟသာင်္တ ထွန်းရင်၏
သီချင်း တစ်ပုဒ်ကို သူ့ ကိုနားထောင်ခိုင်းပြီး ငတိုးတစ်ယောက် အသွဲ့ ကို အင်ထရို လုပ်ပါတော့ သည်။
" ဟဲ့ ... အသွဲ့ ... အခု လော် ထဲက လာနေတဲ့သီချင်းကို နင်၊ နားထောင်ကြည့် စမ်း.."
" အာ..... ဘာဖြစ်လို့ လဲ........ "
"နင်တို့ကိုထွန်းရင်ဆိုနေတဲ့သီချင်းကလဲ ပိတောက်တွေက နှစ်တိုင်း၊သူ့ အတွက် ပဲ ရွေးပွင့် ပေးနေတယ်တဲ့ "
"ငတိုး.. နင်.. ပေါက်ကရ မပြောနဲ့ နော်.. ဒါပဲ.."
"မပြောပါဘူးဟာ.. အမှန်ပြောမလို့ ၊ မောင်ထွန်းရင် တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်တာလေ၊ ပိတောက် က သူ့ တစ်
ယောက်ထဲ အတွက်တဲ့နင်စဉ်းစားသာကြည့် တော့ .."
"အဲဒါ.. နင်နဲ့ဘာဆိုင်လို့ လဲ..."
" မဆိုင်ပါဘူး.. ၊ ဒါပေမဲ့..ဟဲ့ ..အသွဲ့ .".
"မနက်ဖြန် ရေခတ်ရင် ငါတို့ အိမ်ရှေ့ က စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ခုံတွင်း မှာ လာပြီး ရေခပ်ပါဟာ .."
"မခပ် ခြင်ပါဘူး.. တာလမ်းကူးရမှာ.."
"ငါ ဆွဲ ဖြည့် ပေးပါ့ မယ်ဟာ.. နင်ကလဲ"
"ဟဲ့ ..ရန်ကုန်သားရဲ့  .. နင်က ဘယ်တုံးက ရေဆွဲ၊ရေခတ်ဖူးလို့ လဲ..."
"အောင်မာ... နင်ကများ ငါ့ ကို အသင်ထေး နေတယ်၊ နင် သာလာခဲ့ငါဆွဲပြမယ်"
"အထင်သေးပါ..တစ်ခါထဲ..ရှောက်ပြောနေ၊ကဲ..လာပါ့ မယ်တော်၊ငါမဆွဲရ ပြီးရော.." ဆိုပြီး မျက်စောင်း
ထိုးပါတော့ သည်လေ၊ ငတိုး ကိုပါ။
စွန် လေးကို ကိုင်ပြီး ထိုးပေးဘို့ပြေးသွားနေသော အသွဲ့ ၏ နောက်ကျောကို တစ်ဝှီးဝှီးလည်နေသော ရစ်လုံး
ကြားမှ ငတိုး ကြည့် ၍ သူ့ ရင်ထဲမှာ အောင်ပြီ၊အောင်ပြီ ဟု သုံးခါ တိတိ ပြုံး၍ ရေရွတ်နေမိသည်။
အသွဲ့ က ကဲ.. ထိ်ုးလို့ ရပြီလား လေ လာနေတုံး ဟု စွန် လေးကို သူ့ ရင်ဘတ်နှင့် ကြိုးတင်းအောင် စွဲကပ်ရင်း
လှန်းအော်တော့ သည်။ ငတိုးကလည်း ရပြီဟေ့ .. ဟု အော်ပြောပြီး ရစ်လုံးလေးကို မွှတ်နေအောင် ရစ်တင်
လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ အသွဲ့ တစ်ယောက် ဖွဲ လမ်းကြားထဲ လှည့် ပြေးပါတော့ သည်။
ချက်ခြင်းတော့အသွဲ့ တစ်ယောက် ဘာကြောင့်ပြေးသည်ကို သူ မသိလိုက်ပေမဲ့စွန် ကလေး ဝါး တစ်ထောက်
အမြင့်လေ ထဲ အရောက် လေ အဟုန်တွင်ပဲ ဂိုင်း ကန် စုတ်ပြဲ သွားတော့ မှ စွန် အစ နှစ်ဖက်ကို အသွဲ့ အသာ
ဖြဲ ပစ်ခဲ့ မှန်း သိရပါတော့ သည်။
သံမံတလင်း ကျယ်ကျယ် နေပူကြီးထဲ တစ်ယောက်ထဲ ဂိုင်းကန်သွားအောင် ဒေါကန်ပြီး ကျန်ခဲ့ သော ငတိုး
တစ်ယောက်ကို မပြီးဆုံး သေးသော ကိုထွန်းရင် သီချင်းက လှောင်နေသလိုပါ။
အသွဲ့ က ငယ်ငယ်တုံးက သိပ်ညစ်ပတ်လွန်းသည်ဟု ငတိုးထင်ပါသည်။ ( သူ ကလည်း အမြဲတန်း၊ဗိုက်ရွှံ့ နှင့် 
ဖုံ အလိမ်းလိမ်း၊ဂျီးလက်လေးသစ်ပါ။) အမြဲ တွဲလောင်းကျတတ်သော နှပ်ရည် ပြစ်ပြစ်ကို လက်ဖမိုးနှင့်ပါးပေါ်
ဆွဲ ဆွဲ တင်တတ်တော့ထူပိန်းအောင်လိမ်းထားတတ်သော ပါးကွက် ထူထူကြီး နှစ်ဖက် ပေါ်တွင် ခြောက်ကပ်
နေသော နှပ်ချေးခြောက် များကို အမြဲ တွေ့ တွေ့ နေရတတ်ပါသည်။
နှုတ်ခန်းနီ ရဲရဲကြီးကို အမြဲဆိုးထားတတ်သည့် အထဲ ဇီးထုပ် စပ်စပ်ကိုလည်း သူ့ အမေရောင်းသည့်မုန့် ပစ်
သလက်တို့ ထက် ပိုကြိုက်တတ်တော့ ပါးကွက်ထူထူ၊နှပ်ချေးခြောက် တရပစ်နှင့် ရဲတွတ်သော နှုတ်ခန်းတို့ နှင့် 
ဇီးထုပ်ကို သွားစိ၍ ခြစ်ဆွဲ စား စားနေတတ်သော အသွဲ့ ကို ကြည့် ဘူးသော ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ချစ်ခွင့် ပန်ဖို့ 
အသာလေး နမ်းကြည့် ဘို့ရောင်လို့ တောင်မှ စိတ်ကူးမယာဉ်မိခဲ့ ပေမဲ့သည်နှစ် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်
ရောက်လာလို့သူ့ ကိုတွေ့ တော့နှပ်ချေးဖတ်တို့ ကင်းစပြုနေပြီးတစ်မျိုးယဉ်နေလို့ဦးလေးကို အားကျပြီး
ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အသွဲ့ ကို ချဉ်းကပ်ဖို့ ကြိုးစားရခြင်းပါ။
အသွဲ့တစ်ယောက် ရေတွင်းကို ရောက်လာတော့ရေပုံးကို စက်သီးဖြင့်ဖြည်းဖြည်းခြင်း လျှော့ ချနေရင်း
ရေတွင်းထဲ ငုံ့ကြည့် မိတော့နက်လွန်း၍ မဲမှောင်ပြီး ပြပြသာ မြင်ရတော့ သော ရေမျက်နှာပြင်ကို မြင်မိပြီး
ရင် တို့ ဖိုခဲ့ ရပါသည်။
ကျော်ဟိန်းရူး ရူးနေသော ငတိုး ဦးလေး ကိုတင့် ဝေက သူ့ ကြိုက်သည့်အမာရီ့ အပေါ် ထားရှိသည့်သူ့ 
သံယောဇဉ် အတိမ်အနက်ကို ဒီရေတွင်း အနက် ကြီးနှင့် ခိုင်းနှိုင်း ပြောဆိုခဲ့ တော့ ၊ သူ့ကျတော့ရေတွင်း ထဲ
တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေ ဆက်ဆင်းနေသော ရေပုံးကြိုးခွေနှင့် အရှည်နှင့်ခိုင်းနှိုင်းပြောကြည့် ရင် ရမှာပေါ့ဟု
ငတိုး တစ်ယောက် စဉ်းစားနေမိသည်။
အသွဲ့  ကတော့မြေအိုးကို ခါးထစ်ခွင်ရင်း ရန်ကုန်သား ငပွေးကို ဘေးမှ မျက်မှောင်ကြုံ့ ပြီး အသာစောင့် 
ကြည့် နေတော့ သည်။
လက်မောင်း။လက်ဖျံတို့ လက်ကျော တို့တင်းနေအောင် ရေတစ်ပုံးကို တရစ်ခြင်း ခါးကို ကုံး၍ ကိုယ်ကို ဘယ်
ညာ လှုပ်ရန်းဆွဲတင်နေသော မောင်ငတိုးလေးကို အားပေးဖို့ရေတွင်းထဲ ပြေးဝင်လာသည့်နောက်ပရိတ်
သတ်တစ်ဦးကတော့လျှာတစ်လစ်၊အမြီးတစ်ရန်းရန်း ဖြစ်နေသော ငဖြူ လေးပါလေ။
Posted by ahphyulay at 6:10 PM7comments
ရေတွင်းကလေး ( ဒုတိယ )
ကျွန်တော်တို့ အဖွားအိမ်က နတ်မှော်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ တာကလေးရပ်ကွက် မှာဖြစ်ပါသည်။
တာ ကို အစွဲပြုပြီး တာကလေးဟု ခေါ်နေသော်လည်း ကျော်ရသည့် တာကတော့ မသေးပဲကြီး၍ မြင့် ပါသည်။
ချက်ကြီးကားတို့လူဝိတ်၊ကုန်ဝိတ် အပြည့် နှင့်မီးခိုးတို့ မဲပြီး ငယ်သံပါအောင် အော်ပြီး၊တအိအိ တရွေ့ရွေ့ တက်
နေရချိန်တွင် ကိုစပယ်ယာတို့ က ဂျမ်းတုံးကြီးကိုင်ပြီး ကားနောက်မှီးမှ တကောက်ကောက် ပြေးလိုက်၍ တက်ရ
ချက်ကြီး တို့ တောင်၊ ငယ်သံပါအောင် အံကြိတ်၍ တက်ရသော ထိုတာကုန်းကို ငတိုးတို့ ၏ ချက်ကလေးဖြစ်
သည့်" ချစ်ရအောင် " ဆိုက္ကားလေးကရောတဲ့ ..၊ ဆင်း တွန်းရတာပေါ့ နော်။ ချစ်ရအောင် ကို တွန်းဖို့ ရှေ့ကထိုင်
လာသော ငတိုး က ယောင်္ကျားပီပီ စွေ့ ကနဲ ခုန်ဆင်းလိုက်တော့ဆိုက္ကားခမျာ မချိမဆန့် ပတပ်ရပ်လိုက်ရသလို
ဦးထောင်ရရှာလေတော့ ရာ နောက်က အခန့် သားထိုင်လိုက်လာသော ဂျီးဒေါ်ကြီးမှ ဟဲ့ .. ပလုပ်တုပ်..ဘာညာ
စသည်... ဖြင့်အစုံ တုပ် ပါလေတော့ သည်။( အစုံသုပ်မဟုတ်ပါ )
သည်တော့ လဲ ငတိုးနှင့် ဆိုက္ကားဆရာတို့ တောင်းပန်၍ မနဲပြန်ဖိရပါသည်။ ဒေါ်ကြီးကို မဟုတ်၊ ချစ်ရအောင်ကိုပါ။
တအိအိတွန်းလာရသလောက် ကုန်းထိပ်ရောက်ပြန်တော့ထိုးဆိုက်ဆင်းဖို့ပြင်ရပြန်တော့ သည်။
ဆိုက္ကားဆရာကတော့သူ့ အလှည့် လေ၊ ပိုင်းလော့ မျက်နှာပေးနှင့် ဆိုက္ကားကို အသာလေးတွန်းပြီး ခုန်တက်
လိုက် တော့ သည်။ ကုန်ဝိတ်၊လူဝိတ် အပြည့် နှင့်ထိုးဆင်းလာသော ဆိုက္ကားရှေ့မှာ ထိုင်လိုက်လာရသော
ငတိုး တစ်ယောက် ဆိုက္ကား နံ နှစ်ဖက်ကို အတင်းဆုပ်ကိုင်မိရင်း ထိုင်ထားသောဖင် မကြွ မိအောင် သတိထား
ရတော့ သည်။ ခွေးတစ်ကောင်၊ ခလေးတစ်ကောင် မျှ ကုန်းဆင်းတာလမ်းပေါ် ထွက်ပြေးမလာဖို့ လဲ သူ ကပျာပဲ
ဆုတောင်းလိုက်မိနေသည်။ ချစ်ရအောင်၏ ခြေမနှင့်ဘရိတ်ကြိုးကို ညှပ်၍ ဆွဲ ရသည့် ဘရိတ် စနစ်ကို
မကုန်သေးသော ဆိုက္ကားအရှိန်အတိုင်း ကျောက်တော်ကြီးဘုရားကိုကျော်ပြီး အတန်ငယ်ပဲ ဆက်သွားလိုက်
သည်နှင့်ငတိုးတို့ ရဲ့ အဖွားအိမ်ကို ရောက်ပါတော့ သည်။
ငတိုး တို့အဖွားအိမ်ဝင်းရှေ့ တွင် ငတိုးရဲ့ အဒေါ် အပျိုကြီး ဒေါ်ဘေဘီ ဖွင့် ထားသည့် ကွမ်းယာဆိုင်ကလေးရှိပြီး
ဆိုင်ကလေးရဲ့  ဘေးတွင် အရိပ်ကောင်းလွန်းသော ဗန်ဒါပင်ကြီး တစ်ပင်လဲရှိနေပြန်ပါသည်။ ငယ်စဉ် ငတိုးနှင့် 
ဖွားဖက်တော် ခွေးကလေးငဖြူတို့ သေးအပြိုင်ကော့ ပန်းခဲ့ သောအပင်လေးဖြစ်ပါသည်။ မြေဆီကောင်းလို့ ထင်။
အခုတော့မော့ ကြည့် နေရသည့် အရိပ်ရ အပင်ကြီး ဖြစ်နေတော့ သည်။
လမ်းမပေါ်မှ အဖွားတို့ အိမ်ရှေ့ကို ဆိုက္ကားအရှိန်နှင့်ဝဲ ဆင်းလိုက်သည်နှင့်ကွမ်းအစ်ထဲ ကွမ်းသီးလုံးများညှပ်
ထည့် နေသော ငတိုး ကြီးတော် ဒေါ်ဘေဘီက မျက်မှန်ဂိုင်းပေါ်မှ မျက်လုံးတို့လှန်ကြည့် လိုက်ရင်း
" ဟယ်... ငတိုး လာတယ် အမေရေ့  .... ဟဲ့ .. အပြုံးရေ.. မောင်တင့် ဝေ၊ မိကြူ ...." စသဖြင့်ပွဲဆူအောင်
ထ အော်ပါတော့ သည်။
တောနယ်တို့ထုံးစံအတိုင်း ရန်ကုန်သား၊ရန်ကုန်သူတို့ဆင်းလာကြပြီ ဆိုလျှင် စူးစူးစမ်းစမ်း သိချင်၊မြင်ချင်ကြ
ပေသည်။ဖြူသလား၊ မဲသလားပေါ့ လေ။ ဖြူ နေတာကတော့သေချာပါသည်။ ဖုံတွေကြောင့် ပါ။
လမ်း တစ်ဖက်ခြမ်းရှိ ရေတွင်း ထဲမှ အပျို တစ်သိုက် တို့အကြည့် က ဦးစွာရောက်ရှိလာတော့ သည်။
ပြီးတော့အိမ်ဝိုင်းထဲမှ " ဝုန်း " ကနဲ ထိုးဟောင် လိုက်သူက ငဖြူ ပါ၊ ကြီးဒေါ်၏ အော်သံကြောင့်ရှေ့လက်
နှစ်ခြောင်းပေါ် မေးလေးတင်ပြီး ဇရက်မင်းစည်းစိမ်အပြည့် ခံစားနေရာမှ အလန့် ထညက် ထ ဟောင်တတ်သည့် 
အကျင့် ကတော့ငယ်ငယ်က အတိုင်းပါပဲ။ ပြီးမှ ဘယ်သူ၊ဘယ်ဝါ ဇာတ်ရည် လည်သွားတော့ မှ ဇက်ကလေးပု
၍ လျှာတစ်လစ်ကလေးနှင့်သူ့ အမွှေးဖွားများကို ဘယ်ညာ လှုပ်ရန်းပြီး တဇာတ်ဇာတ် ခါထုပ် မျက်နှာချိုသွေး
တတ်သည်မှာလည်း ဟိုး..အရင်က အတိုင်းပါပဲလေ ။
အရင်ကအတိုင်းရှိနေသေးတာကလဲ အိမ်မကြီးတံစက်မြိတ် ညာဖက်ခြမ်းရှိသဲနုနု၊မြက်နုနုတို့ ခင်းထားသည့် 
သောက်ရေအိုးစင်လေးပါ။ အရင်အတိုင်းမဖြစ်တော့ သည်က ငတိုးရဲ့ အဖွား ၊ ပက်လက်ကုလားထိုင်ပေါ်မှာပဲ
အချိန်ကုန်လွန်နေရပြီး လူတွဲနှင့် ပဲ လျှောက်နေရခြင်းပါ။
ငတိုး ငယ်စဉ် အလည်တန်းကျောင်းသားဘဝက ဦးလေးတွေ၊အဒေါ်တွေ တာလမ်းကြီးကို ဖြတ်ကူးပြီး အိမ်ရှေ့ 
စွန်ပျံ ဆေးလိပ်ခုံရှိ ရေတွင်း မှ အိမ်သုံးရန်အတွက် ထန်းပိုးကိုယ်စီ၊ရေပုံးကိုယ်စီဖြင့်အလှည့် ကျ ထမ်းဖြည့် ခဲ့ 
ကြရသည်။ ထိုစဉ်က ငတိုး တတ်နိူင်သည်က အိမ်တံစက်မြိတ်မှ စောင့် ၍ အဒေါ်တွေ၊ဦးလေးတွေ ထမ်းလာ
သည့် ရေပုံးအချို့ ကို မနိူင့် တနိူင် ဆွဲယူပြီး ရေအိုးစဉ်ပေါ်ရှိ ရေအိုးသုံးလုံးကို ကူဖြည့် ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
မနိူင့် တနိူင် ဆိုတော့ လဲ ၊ ဖိတ်တဝက်၊ စင်တဝက်ပေါ့ လေ ။ တဝက်တွေများလို့အိုးထဲတော့ နဲနဲရောက်ပါ၏
တွင်းရေခတ်တိုင်း အများဆုံး အတွဲများသည်က ငတိုးနှင့်သူ့ ဦးလေး ကိုတင့် ဝေပါ။ ကျော်ဟိန်း၊ဇော်ဇော် တို့ 
လျှန်းလျှန်းတောက်နေချိန်က သူလဲ ကျော်ဟိန်းရူးရူးနေခဲ့ သူပါလေ။ တူဝရီး ဆိုသော်လည်း သူတို့ နှစ်ယောက်
ဦးလေးလုပ်သူက တာလမ်းမကြီးကို အခေါက်ခေါက်၊အခါခါ ဖြတ်ကူးပြီး လျှာထွက်မတတ် တွင်းရေ ကို ခတ်ပေး
သလောက် ငတိုး တစ်ယောက်ကလည်း သောက်ရေအိုး သုံးလုံးကို ဖိတ်တဝက်၊စင်တဝက်ဖြင့်တကိုယ်လုံး
ရွှဲရွှဲစိုပြီး တစ်နွေကုန်လုနီးပါးဖြည့် နေပေမဲ့ဦးလေးဖြစ်သူက တစ်ချက်ကလေးမှ မညီးရှာပါ။ ဘာကြောင့် လဲဆို
ရေတွင်းကလေးမှာ သူ့ ရည်းစား အမာရီ ရှိနေလို့ ပါပဲ။
ငတိုး ဦးလေးက အမာရီ့  ကို ချစ်တဲ့ အကြောင်းလေး ပြောမလို့ ပါ ဆိုပြီး နေ့ တိုင်းရေတွင်းကလေးမှာ ချိန်းပြီး
ရေခတ်နေကြပေမဲ့ကျော်ဟိန်းအိုင်တင်နှင့်ချစ်တဲ့ အကြောင်းပြောဖို့ ခွင့် တောင်းပြီး တနွေသာကုန်သွားရော။
မပြောဖြစ်ခဲ့ သည့်ဦးလေးကို ငတိုး နားမလည်ခဲ့ ပေမဲ့အားတော့ ကျနေခဲ့ တာအမှန်ပါ။
ဒီလိုပဲ နေ့ စဉ် တူဝရီးနှစ်ယောက် တာကလေး လမ်းမကြီးကို ချောင်းဖြစ်သွားအောင် ရေဆွဲ၊ရေခတ်ခြင်း အလုပ်
ကို အဖွားရဲ့  အအော်၊ အဟန့် တို့ နဲ့ ပဲ ပြီးဆုံးနေခဲ့ ရတာပါ။
ဦးလေးကို အားကျတော့ဦးလေးခြေရာနင်းဖို့ငတိုးကြိုးစားပါတော့ သည်။
ဝါသနာတူလာတော့မှန်လုကြရပါတော့ သည်။ ဦးလေးနဲ့ လေ။ အဖွားအိမ်က မှန်ကိုပါ။ မှန်တင်ခုံက တင်ပြင်
ခွေထိုင်ပြီး ကျောက်ပြင်တင်၍ သွေးလိမ်းရသည့်မှန်တင်ခုံပါ။ မှန်က ငိုက်လို့ ၊လှန်လို့ ရပါသည်။ ကိုယ်လုံး
ပေါ်ချင်ရင်တော့မတ်တတ်ထ နောက်နဲနဲ လျှောက်ပြီး လှည့် ကြည့် ရပါသည်။
အဒေါ် လေးယောက်က ရှေ့ မှ သနပ်ခါးကိုယ်စီသွေးပြီး တို့ ဖတ် ဖြင့် တဖုန်းဖုန်း၊တဖတ်ဖတ် အသီးသီးရိုက်သွား
ခဲ့ ကြ၍ မှန်တင်ခုံရှိမှန်ပေါ်တွင် သနပ်ခါးစက်တို့ အမြဲတန်းပေပွနေတတ်သဖြင့် ငတိုးက အမြဲ ပြောင်နေအောင်
ရေပတ်ပြန်တိုက်ရပါသည်။ ဦးလေးကတော့ရေတွင်းကလေးကို အချိန်မှီ ကျော်ဟိန်းနှင့် တူအောင် သွားဖို့ 
မှန်ကြည့် ပြီး လေ့ ကျင့် နေရသောကြောင့်မအားဖြစ်နေရသည်လေ။ ငတိုးကတော့သူ့ ကို မပြောတော့ ပါ။
သူများအတွက် ပါရမီဖြည့် ပေးမှ ကိုယ့် အတွက် ပါရမီတွေ ပြည့် လာတော့ မှာမဟုတ်လားလို့ ။
ငတိုးချိန်မည့်ပစ်မှတ်က " အသွဲ့ " ပါ။ သူနှင့် ဘယ်တော့ မှ မတည့် သည့်အသွဲ့ ပါ။
နေရာကလည်း ဦးလေးနှင့်ကော်ပီ စွဲထားသည့် နေရာ..၊
Posted by ahphyulay at 7:43 PM9comments
ဟင်္သာတမြို့ကမ်းနဖူးရှိ င်္ဟသာဦး တည်းခိုခန်းပေါ်မှ သောင်ပြင်ကြီးပေါ်သို့လှန်းမျှော်ကြည့် နေရင်းက
ဟိုးအဝေးကမ်းနားတန်းဖက်တွင် တထောင်းထောင်းထနေသော ဖုန်ခိုးတို့ အောက် ရုတ်ရုတ်၊ရုတ်ရုတ်နှင့် 
ဟိုမှသည် ပျားပန်းခတ်မျှ ရောက်ရက်ခတ်နေသော လူတွေ၊ကုန်ကားတွေ၊ဆိုက္ကားတွေကို လှန်းမြင်လာရ
ပါတော့ သည်။ ရန်ကုန်ရထားကြီးဆိုက်လေပြီ။
နေကြာတောထဲရှိ စွတ်ကြောင်းအတိုင်း တလိမ့် လိမ့် လွင့် ပျံနေသော ဖုန်လုံးကြီးက၊ ဟင်္သာတဖက်ကမ်းဆီသို့ 
တရွေ့ ရွေ့ချဉ်းကပ်လာနေပါသည်။ ခရီးသည်များနှင့် ဆိုက္ကားတန်းကြီးပါ။
နွေဦး ကာလ ဖြစ်သောကြောင့် လည်း လေရှုးလေပွေတို့ က သောင်ပြင်ကြီးတလျှောက် ဟိုနေရာတစ်ကွက်၊
ဆိုက္ကားဆရာတို့ က အကွယ်၊အကာမဲ့ နေသော သောင်ပြင်ကြယ်ကြီးထဲရှိ လေရှုးတို့ ကို ထိုးခွင်းခရီးနှင်သွား
နိူင်ရန်အတွက်၊ ရှေ့တစ်စီးနှင့် နောက်တစ်စီး ထိကပ်ချိတ်ဆက်ပြီး၊အတန်းလိုက်၊အဖွဲ့ လိုက်၊အတင်း ပူးကပ်ပြီး
အားကုန်သုတ်နင်းတက်လာကြသည်မှာ ရှေ့ တစ်စီး၏နောက်ထိုင်ခုံခြေနင်းနှင့်နောက်တစ်စီး၏ရှေ့ ထိုင်ခုံ
ခြေနင်းတို့ တောင် မထိ၊တထိ ဖြစ်ဖြစ်နေကြ၍ မရောက်ဖူး၊မလာဖူးသေးသောခရီးသည်တို့ က ရှေ့ နောက်
ကြည့် မိပြီး ပြုံးမိနေကြပြန်ပါသည်။
ကုန်ဝိတ်အပြည့် နှင့်ချီတက်လာသော ဆိုက္ကားတို့ ကို မြို့ ပေါ်မှ နောက်ကျပြီး၊ အူရားဖားရား ပြေးဆင်းလာနေ
သော ဆိုက္ကားဆရာတို့ က ရောင်းရင်းအခြင်းခြင်း ကမ်းနားတွင် ခရီးသည် ကျန်မကျန် သတင်းလက်ဆင့် ကမ်း
ဆိုက္ကားနာမည်လေးတွေကလည်း သတ္တိ တဲ့ ၊ သူရ ၊ ဗလ ၊ ချစ်သူ၊ ချစ်ရအောင်... တဲ့ ။ စုံလို့ ပါပဲဗျာလို့ ။
ရန်ကုန်က ချက်ကြီး ကားများလိုပါပဲ။ ကုန်ချိန် ခွင်သလောက် အဲ.. နိူင်သလောက်၊ ခရီးသည် ဆန့် သလောက်
သတိ.. ကုန်းဆင်း အလွန်မြန်သည်၊ ဆိုသလိုပါပဲ။ ခရီးသည် ရှေ့ ၊နောက်၊ဘေး သုံးယောက်၊ ခါးထစ်ခွင် ချီနိူင်
သည့်ခလေးများနှင့် ပါဆို ငါးယောက်၊ အဝတ်အိပ်တွေ ဝန်စည်စလယ်တွေက ထိုင်ခုံအောက် ရှေ့ နောက်
ခြေနင်းနှစ်ခုကို တန်းထိုး၍ ပါလာသမျှ ခရီးသည်တွေရဲ့ပစ္စည်း တစ်ခုမှမကျန်ရအောင် တင်တော့ သည်။
ပြီးလျှင် နိူင်လွန်ကြိုးနှင့်ခြေကန်၍ အတင်းတုပ်ချီတော့ သည်။ လူတွေကတော့အင်း..မကောင်းတတ်လို့ ထင်။
ပစ္စည်းတွေနှင့် ရောပြီး ထည့် ပြီးမချီတော့ ပါ။
သောင်ပြင်တစ်လျှောက် ဖုံတစ်ထောင်းထောင်းနှင့်အတွဲလိုက် သုတ်လာသော ဆိုက္ကားတန်းကြီးက သောင်ကျ
ချောင်းကလေးကိုဖြတ်၍ တစ်နွေစာ ဝါး၊ဓနိ၊ဖျာ တို့ ဖြင့် ဆောက်ထားသော ဆယ်ပြား တံတားလေးရောက်တော့ 
မြို့ အဝင် တံတားဖြတ်ခ တစ်ယောက် ဆယ်ပြား ပေးဆောင်ရမည်လေ။ သည်တံတားလေးဖြတ်ပြီး ကုန်းပေါ်
ဆိုက္ကားကို တွန်းတက်လိုက်သည်နှင့်ဟင်္သာတ မြို့ ကြီး ပေါ်ရောက်ပါပြီ။ လော်စပီကာ ပေါင်းစုံတို့ မှ အလှုခံသံ၊
ဟင်္သတ ထွန်းရင်၊ တွံတေး သိန်းတန် စတဲ့သီချင်းများကို နားနှင့် မဆံ့ လောက်အောင်ကို ကြားရတော့ မှ
ရန်ကုန်မှ စီးလာသည့်ဆင်ခြောက်ကောင် ကတ္တီပါ ဖိနပ်ကို ငတိုး တစ်ယောက် စိတ်ပျက်စွာပဲငုံ့ကြည့် ဖြစ်တော့ 
သည်။ စွတ်စွတ်ဖြူအောင်ကို ဖွေးနေပါရောလား..လို့ ။ သူ.. အင်မတန်မှ ကြိုက်တတ်သည့် ရှားရောင်လေး။
ဖမ်းမရပါတော့ ပြီ။ ( အရောင်ကိုပြောတာပါ )
လည်ချောင်းထဲ၊ နှာခေါင်းပေါက်တွေထဲမှာလည်း ဖုံတွေ အတောင့် လိုက် ခဲနေပြီ။
သာရဝေါဘက်ကမ်းထဲက တစွတ်စွတ်၊တဂွပ်ဂွပ် သောက်လာခဲ့ သည့် ရေကုသိုလ်လို့ .. တစာစာအော်ပြီး မြေအိုး
လေးများဖြင့်ခေါင်းရွက်ရောင်းရောင်းနေသည့်မြစ်ရည်အေးအေးလေးတွေလဲ ဘယ်ပျောက်ကုန်သည်မသိတော့ ။
အဖွားအိမ်ရောက်မှ တွင်းရေ အေးအေးလေးကို လက်ကိုင် ရှည်ရှည် အုန်းမှုတ်ခွက်လေးနှင့်ခပ်ပြီးသောက်
တော့ မည်လို့ငတိုး တစ်ယောက် အားခဲ လိုက်မိသည်။ မြေအိုးဖုန်းလေးဂေါင်းပေါ်တင်၊ ရေအိုး ပတ်ချာလည်
ရှိ သဲနုနု၊ မျက်နုနု လေးတွေကို ကြည့် ရင်း လေးလေး၊ဖန်ဖန်လေးနှင့်ချိုအေးသော တွင်းရေကလေးကိုပါ
မြင်ရောင်လာပါတော့ သည်။ နောက်.. ငယ်သူငယ်ချင်းများ..။ အရောင်မဆိုးခဲ့ သော၊ လတ်ဆတ်ခဲ့ သော ငယ်
ဟင်္သာတမြို့ ၏ ထူးခြားသည့် လက္ခဏာများကတော့ကျွန်တော့် အထင်ပြောရရင်၊ မိုးတွင်း ကာလတိုင်း တက်
လာလေ့ ရှိသည့်မြစ်ရေတို့ ကို ဟန့် တားနိူင်ရန်အတွက်၊ မြို့ တွင်းဝယ် မြစ်နှင့်အပြိုင် အလျှားလိုက် ဆည်ဖို့ 
ထားသည့်တာဘောင်၊တာရိုးကြီးများပါလေ။
Posted by ahphyulay at 10:10 PM9comments